မကျမောမိတယျ – My Blog
ဆေးရုံကွီး အပွငျဘကျ မှနျပွတငျးပေါကျကနေ အပွငျကိုလှမျးကွညျ့ မိတော့ ကြေးငှကျသံလေးတှနေဲ့ အစိမျးရောငျ သဈပငျကွီးမြားကွောငျ့ ဘဝ အမောတှကေို ခဏတာ မပြေ့ောကျ သှား စတောပဲလေ။ မနကျ ၈နာရီ ကြျောကြျော လေးပဲ ရှိသေးတာပါ။ ညက ဆိုငျကယျ အကျဆီးဒငျ့ ဖွဈတဲ့ လူနှဈယောကျ ရောကျလာတော့ ၂ယောကျလုံး နှေး ကိုယျတိုငျ ရရှိလာတဲ့ ဒဏျရာတှကေို ခြုပျပေးရတယျ။ တယောကျက လကျမောငျး နှဈဖကျ နဂါးပုံ တကျတူးတှနေဲ့ အသကျက ၂၀ကြျောလောကျပဲ ရှိမှာ မကျြနှာ နုနုခြောခြော လေးကို နားကှငျးတှရေော မကျြခုံးပျေါပါ အကှငျးလေးတှေ ဖေါကျဆှဲထားတော့ ရုတျတရကျဆို အကွညျ့ရ ဆိုး နတောပေါ့။ အရိုးခေါငျးတှပေါတဲ့ တီးရှပျ အနကျရယျ လညျပငျးက စတီးဆှဲကွိုး ပွောငျပွောငျ လကျလကျကွီးရယျ လကျကောကျဝတျက အနကျရောငျ သရပွေားပျေါမှာ ကွယျပုံစံ ဖနျစီပုံတှေ အိုးးးး မကျြလုံးထဲ ရှုပျယှကျခတျနတောပဲ။
ပေါငျလယျမှာ ၄လကျမ လောကျ ဘာလိုခိုငျးမိတာလဲတော့ မသိဘူး ပေါငျလယျမှာ ၄လကျမလောကျ ပွဲသှားတာ ဒဏျရာ နကျတော့ သှေးတအား ထှကျနတောပေါ့။ ထိုငျခုံ အပုလေးပျေါ ထိုငျခိုငျးရငျး ဒူးဖုံး ဘောငျးဘီ အပှလေးကို ပေါငျရငျးထိ လှနျတငျပွီး ခြုပျပေးတော့ သူတော့ မသိဘူး နှေး တော့ ရငျတှေ ခုနျနေ ရသေးတယျ။ ခြုပျပေးတဲ့ ဘယျဘကျပေါငျရငျးနားက ပနျးနုရောငျ ဒဈကွီးက ဘောငျးဘီ အဟလေးကနေ ထှကျနတော။ ” မမနှေး … မအိပျသေးတာလား … နိုးနတောလား ” ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကို နားနခေနျးထဲ ထိုငျတှေးနတေုနျး တံခါးခေါကျသံနဲ့အတူ မအိ ဝငျလာပါရော။
” အျော … မအိ လာလာ … အိပျပါတယျ … ခုပဲ နိုးတာ ” ” မုနျ့ ဝယျပေးရမလား … သမီး သှားဝယျပေးမယျ ” ” နပေါစတေော့ မအိရယျ … အိမျရောကျမှ စားတော့မယျ ” မအိဆိုတာ နဈ(ဈ) မလေး တယောကျပါ အသားညိုညို လုံးလုံး လေးနဲ့ မကျြနှာလေးက အမွဲပွုံးနလေို့ ဆေးရုံက ဆရာဝနျးတိုငျးက ခဈြကွတယျ။ ” အံမယျ … မမနှေးက … ဦးစိုး ခရီး ထှကျနတောဆို … ဒီမှာပဲ … နလေေ … ညကွမှ ပွနျပေါ့ … ဘာလဲ ဒီမှာဆို လှမျးနတော သိမှာဆိုးတာလား ” မအိက ပွုံးစိစိလေးနဲ့ နှေးကို စနတောပါ။ နှေးထကျ ၁၀နှဈကြျောလောကျ ငယျပမေယျ့ မမနှေးလို့ ချေါပွီး ညီအမတှလေို ဆကျဆံကွတယျ။
နှေးအသကျက ၃၄ထဲမှာ မအိ အသကျက ၂၀ကြျောလေးရယျ နှေးခငျပှနျး ကိုကွီး စိုးမွငျ့ အသကျက ၄၇နှဈဆိုတော့ မအိက ဦးတပျချေါတာပါ။ ကိုကွီး အလုပျနားရကျတှေ ဆေးရုံ လာကွိုရငျး မအိတို့နဲ့ ရငျးနှီးနတောပေါ့။ ” မယျ့လေးတျော … ရှငျတို့ လငျယူမှ အဲဒီ ခံစားခကျြ … သိမယျ … ခိခိ ” မအိ ပွောပွီးတာနဲ့ အခနျးထဲက ဘစေငျလေးနား လြှောကျသှားပွီး နှေးလညျး ညကOperation လုပျပေးထားလို့ လကျတှကေို ပိုးသတျဆေးနဲ့ ဆေးကြောသနျ့စငျနတော။ နှေးအကငျြ့က အိမျပွနျကာနီး အမွဲတမျး လကျဆေးပဈတာ အကငျြ့ဖွဈနပေါပွီ။လကျဆေးနတေုနျး မအိက နောကျကနေ ခါးဖကျပွီး နှေးဖငျသားစိုငျတှကေို သူ့ပေါငျဂှလေးနဲ့ ဖိပှတျနတော။ ” ဟိတျ … အခြိနျပွညျ့နျော … ချချ ” မအိက ဇှတျပဲ နှေးဖငျကွီးကို အနီးကပျမွငျရငျ အူယားတယျဆိုပွီး လူရှငျးပွီဆို အမွဲ ပှတျသပျနတေတျတာ။ ဆေးဘီဒိုလေး နောကျ နံရံလေး ကပျလိုကျရတယျ အပွငျက တယောကျယောကျ ဝငျလာရငျ ရုတျတရကျမမွငျအောငျ ကပျပေးရတာပေါ့။
မအိက ကလေးတယောကျလို နှေး နို့အုံလေး ညှဈလိုကျ ဖငျတှေ ညှဈလိုကျနဲ့ အားရအောငျ ပှတျသပျ ညှဈခပြွေီးမှ လူခငျြး ခှာလိုကျတော့တယျ။ ” မမနှေး … အခနျးသော့ သမီးပဲ သိမျးထားလိုကျမယျနျော ” ” အငျးပါ … နှေးလညျး ညကွ … စောစော ပွနျထှကျခဲ့မှာ ” နှေး ဆေးရုံကနေ အိမျအပွနျ စားနကွေ ခေါကျဆှဲဆိုငျက ရှမျးခေါကျဆှဲ ဝငျဝယျခဲ့သေးတာ။ အိမျရောကျတာနဲ့ နှေးခငျပှနျး ကိုကွီးစိုးမွငျ့ ဆီ ဖုနျးဆကျသေးတယျ။ နောကျ၃ရကျနမှေ ရောကျမယျပွောနတော။ ခငျပှနျးနဲ့ ပွောပွီး ရခြေိုးဖို့ နှေး အဝတျတှေ ခြှတျခပြွီး ထမိနျရငျလြား နတေုနျး ဖုနျးသံလေး မွညျလာတော့ ဖှငျ့ကွညျ့ မိတာပေါ့။ ” ဟယျလို … နှေး အဆငျပွရေဲ့လား ” ” ဟယျ … ဆရာ … မတှတေ့ာ ကွာပွီ ……ပွပေါတယျ ဆရာရယျ ” ” အေးအေး … ဆရာလညျး ဒီမွို့လေး ခဏပွနျလာတာ … ရောကျတာနဲ့ ညညျးသတိရလို့ … လှမျးဆကျလိုကျတာ ”
” ဟုတျဆရာ … နှေးလညျး … ခုမှ ဆေးရုံက ပွနျရောကျတာ … ရခြေိုးမလို့ ” နှေး ရခြေိုးမယျ ပွောတော့ ဆရာ ဦးနိုငျမျော စကားသံ ခဏ ငွိမျကွသှားတယျ။ ခုတိုကျနယျဆေးရုံ လေးက နှေးထကျ အရငျ တာဝနျကတြဲ့ နှေးဆရာပေါ့။ဆရာ ဦးနိုငျမျော ပငျစငျယူသှားလို့ နှေးက ယာယီ တာဝနျထမျးဆောငျရငျ နောကျကြ ခှဲစိတျ ဆရာဝနျအနနေဲ့ တာဝနျကလြာတော့တာ။ ” ဆရာပွောတာ … ပွနျလညျး မပွောဘူး နှေး ” ” ရှငျ … ဆရာ ” ” ညနကွေ … ဆရာ လာချေါမယျ … မတှတေ့ာကွလို့ … စားရငျး သောကျရငျး စကားပွောရအောငျ ” ” ဟုတျ … ဆရာ … နှေး စောငျ့နပေါ့မယျ ” နှေးလညျး ရခြေိုးပွီးတာနဲ့ ဝယျလာတဲ့ ရှမျးခေါကျဆှဲစားရငျး ဆရာဦးနိုငျမျော နဲ့ ဆေးရုံမှာ စပွီး ဆုံတဲ့အကွောငျးလေး စဉျးစားနမေိတော့တယျ။
နှေးရောကျကာစ ဆေးရုံအထူးကုဆောငျရဲ့ ဝရနျတာလကျရမျးပျေါ မှီရပျရငျး တခွား ဆရာဝနျတှေ စောငျ့နမေိတာ။ မိတျဆကျပှဲ လုပျပေးမလို့ ပွောထားလိုလေ။ ” ဟိတျကလေးမ … နှေးနှေးလှိုငျ ထငျတယျ ” နှေး လကျက နာရီလေး ငုံ့ကွညျ့နတေုနျး ရုတျတရကျ အသံထှကျလာလို့ အသံလာတဲ့ဆီ ကွညျ့လိုကျတော့ ကုတျအကငြ်္ီနကျပွာလေးနဲ့ ဘကျဘီဘောငျးဘီ နကျပွာ ဝမျးဆကျဝတျထားတဲ့ လူကွီးတယောကျ။ ” ဟုတျကဲ့ရှငျ့ ” ” လာလာ … အထဲ ဝငျရအောငျ … ဒီလို ဝရိယ ရှိရငျတော့ ဒီဆေးရုံတှကျ … အားကိုးရမှာပါ ” ” ဟုတျဆရာ … နှေးက ခုမှ စရောကျတဲ့ … အသဈဆိုတော့ … ကွိုရောကျနတောပါ ” မကျြနှာ ခနျ့ခနျ့ငွားငွား နဲ့ စကားပွောရငျ တဖကျသားပျေါ လှမျးမိုးမှု့ ရှိတဲ့သူလို့ နှေး ကောကျခကျြ ခနြမေိတယျ။ ဆရာဝနျ တယောကျမှနျး သိပမေယျ့ အဲ့ခြိနျ ဒီတိုကျနယျ ဆေးရုံရဲ့ အထူးကု ဆရာဝနျကွီးဆိုတာ မသိသေးဘူး။ ရိုးရိုး ဆရာဝနျမှတျပွီး စကားပွောနခေဲ့တာ။
ထူခွားတာက ဆရာဦးနိုငျမျောနဲ့ နှေးတို့ ခဏလေးနဲ့ ရငျးနှီးသှားကွတယျ။ ဒါကလညျး ဆရာ ဦးနိုငျမျောရဲ့ အရညျခငျြးတခုပါ တဖကျလူရဲ့ စိတျကို နားလညျပွီး အလိုကျသငျ့ ပွနျပွောပေးနိုငျတဲ့ ပါရမီရှငျပေါ့။ တဖွညျးဖွညျး အခနျးလေးထဲ ဆရာဝနျတှေ ဆရာဝနျမတှေ လူစုံတော့မှ ဆရာဦးနိုငျမျောက သူ့ကိုယျသူ မိတျဆကျရငျး နှေးနဲ့ တခွား ဆရာဝနျတှကေို မိတျဆကျပေးတာ။ အဲကမြှ နှေးလညျး မကျြလုံးပွူးသှားရတာပေါ့။ ခှဲစိတျတဲ့ ဘကျမှာ ဒီတိုကျနယျလေးသာမက နှေးအရငျ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ နှေးတို့ မွို့လေးထိ ဆရာ့ ဂုဏျသတငျးက မှေးပြံ့နတေယျ။ နှေး ရောကျပွီး ၆လ အကွာမှာပဲ ဆရာက ပငျစငျ ယူသှားတာပါ။ ပငျစငျသာ ယူသှားတာ နှေးခငျပှနျးနဲ့ မတိမျးမယိမျးလောကျကို နုပြိုနတေုနျး။ အဲဒီ ၆လ အတှငျး နှေး ရငျခုနျရတဲ့ အခြိနျတှေ သတိရတိုငျး စိတျထဲ သိမျ့ကနဲ့ အေးကနဲ့ ခံစားမိတုနျးပဲ။ ဆေးရုံရောကျပွီး သိပျမကွာဘူး အိသူဇာဆိုတဲ့ နဈ(ဈ) လေးနဲ့ ရငျးနှီးမွနျခဲ့တယျ။
ဆေးရုံတခုလုံးက ခဈြကွပုံပါ ကလေးမလေးက အသကျငယျပမေယျ့ သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ ခိုငျးတာမှနျသမြှ မငွီးမငွူ လုပျပေးတော့ အကုနျလုံးက ခဈြခငျနကွေတာပေါ့။ အမြားချေါသလို မအိလို့ပဲ နှေးလညျး ချေါနမေိတယျ။ မအိက စကားပေါသလောကျ နှေးမရောကျခငျက ဒီဆေးရုံ အကွောငျးတှေ ပွောပွတာ ဟုတျသညျရှိ မဟုတျသညျရှိ စိတျဝငျစားဖို့တော့ အကောငျးသားပဲ။ သရဲဆိုလား နာနာဘာဝ ဆိုလားပဲ နှေးက သိပျ မယုံပမေယျ့ သူပွောပွနပေုံက တကယျ့ စိတျဝငျစားစရာတှေ။ နောကျကမြှ ဆရာဦးနိုငျမျောနဲ့ ရငျနှီးသှားရတာ။ မှတျမှတျရရ နှေး ဆေးရုံမှာ တာဝနျကပြွီး ၂လ အကွာလောကျပဲ။ အရေးပျေါ လူနာ တယောကျ အကျဆီးဒငျ့ ဖွဈပွီး သတိလဈရောကျလာတော့ နှေးတို့ အသကျကယျဖို့ ကွိုးစားတုနျး သတိတခကျြ လညျလာပွီး နှေးမကျြနှာ စိုကျကွညျ့ရငျး ဆုံးသှားရှာတယျ။
တီးရှပျအကငြ်္ီအဖွူလေးရော အောကျက ဘောငျးဘီတို အနကျလေးရော ပှနျးရာ ပဲ့ရာတှနေဲ့ စုပျပွတျသတျနတော။ ခေါငျးက ဦးခှံနဲနဲ လနျပွီး သှေးထှကျနတော အမြားကွီးပဲ။ နှေးလညျး စိတျမကောငျးပမေယျ့ ဘာမှ မတတျနိုငျခဲ့ဘူး။ ည ၂နာရီ Operation တခု ထပျဝငျရမို့ နာရီကွညျ့တော့ ၁၂မတျတငျးရှိသေး အခြိနျလိုသေးတာနဲ့ မအိနဲ့ စကားပွောရငျး အခြိနျဖွုံးဖို့ စဉျးစားမိတယျ။အရေးပျေါခနျးက ထှကျပွီး လာနကွေအတိုငျး မလြှောကျပဲ မွောကျဘကျကှပွေီ့း အရှဘေ့ကျ လြှောကျလာတော့ ရုတျတရကျ နှာခေါငျးထဲ တိုးဝငျလာတဲ့ ဆေးနံ့ပွငျးပွငျးကွောငျ့ နှေး အသကျအောငျ့ ထားလိုကျရတာပေါ့။ မအိတို့ နဈ(ဈ) တှေ နားနခေနျးထဲ ရောကျဖို့က ကုသဆောငျ ၃ခုလောကျ ဖွတျလြှောကျရဦးမှာ အနံ့ ထှကျလာတဲ့ဘကျ အသာလေး ငှဲ့ကွညျ့တော့ လနျ့သှားရောပဲ။ ” ဝှီးးးး … ဖလပျ … ဖလပျ … ဖလပျ … ဂဈဂဈ ”
” ဟဲ့ … အမလေး ဘုရား ဘုရား ” ရုတျတရကျ အတောငျခတျသံနဲ့ ညဥျ့ငှကျတကောငျရဲ့ အျောသံက ခကျြခွငျး ထှကျပျေါလာတော့ နှေး လနျ့ပွီး အျောမိတာပေါ့။ ကုသဆောငျတခုရဲ့ ထောငျ့ခြိုး ရောကျတော့ အပွငျ ဆေးဝယျထှကျတဲ့ လူနာစောငျ့ တယောကျ တှလေို့ စိတျအေးသှားမိတယျ။ အဲခြိနျ ဖတျြကနဲ့ မီးကလညျး ပကျြ ဆေးနံ့စူးစူးကွီးက နှေးနောကျ ကပျပါနတေုနျးပဲ။ မအိတို့ နဈ(ဈ) တှေ နားနခေနျး မွငျနရေပွီ ကွားထဲ ကုသဆောငျ တခုပဲ ကနျြတော့တာ။ ” ရှပျ ရှပျ … ရှပျ ရှပျ ရှပျ ” အနံ့ဆိုးက ပိုပွငျးလာပွီး ခွသေံတှပေါ ကွားလိုကျရတော့ နှေး ကွကျသီးတှေ တဖွနျးဖွနျး ထလာနပွေီ။
” ရှပျ ရှပျ ရှပျ … ရှပျ ရှပျ ” ခွသေံတှေ အနားကပျလာလို့ နောကျလှညျ့အကွညျ့ အံအော မှငျသကျပွီး နောကျကို ခွလေမျး သုံးလေး လှမျး ဆုတျမိလိုကျတာ။ ” အမလေး … ဆရာရယျ … အသံမပေးပဲနဲ့ရှငျ … ဟူးးးးးးးး ” ဖွဈခငျြတော့ နှေးနောကျကို အဆုတျ ဟနျခကျြပကျြပွီး ထမိနျအောကျနားစက နှေးဖိနပျနဲ့ ခြိတျဖိမိတော့ ထမိနျကြှတျကသြှာတယျ။ လှမျးဖမျးတော့ နှေးပေါငျလယျလောကျမှာ ထမိနျအနားစကို ဆှဲမိတာပဲ။ အမွနျပွနျဝတျလိုကျပမေယျ့ ဆရာဦးနိုငျမျောရဲ့ မကျြလုံးတှကေ နှေးပေါငျဂှထဲ ရောကျနတောပေါ့။
ဆရာ ဦးနိုငျမျောလညျး Operation တခုပွီးလို့ ပွနျနားတာနမေယျ။ ” ခိခိ … ဆရာ ထှကျလာတော့ ညညျးက … ညညျးအခနျးပွနျတာ … ပွနျနကွေ အတိုငျး မပွနျပဲ … အနောကျထဲ ခြိုးကှပွေ့နျလို့ … ဆရာ လိုကျကွညျ့နတောပါ ” ” နှေးက … ည ၂နာရီ Operation တခု ထပျဝငျရမှာမို့ … မအိ ဝငျချေါပွီး စကားပွောရငျး … အခြိနျ ဖွုံးမလို့ပါ … ဆရာရယျ … အဟငျး ဟငျး ” နှေးလညျး ဆရာရှေ့ ရှကျရှကျနဲ့ ထမိနျ ဖွဈသလို ဝတျရငျး ခေါငျးငုံ့ နမေိတာပေါ့။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး မကျြလုံး လှနျကွညျ့တော့ အံအောနမေိပွနျရော။အဲခြိနျ ဆရာ ဦးနိုငျမျောက နှေး နောကျကြောဘကျ တောငျဘကျဒေါငျ့က လူနာထိုငျခုံအရှညျတှေ ဆငျ့ထားတဲ့ ဘကျ အကွညျ့ရှပွေီ့း စကားလှမျးပွောနတော။ ” ဘယျသူလဲ … အောကျဆငျးစမျး … ဟာ … မငျး မငျး … လူနာ တယောကျ မဟုတျလား ” ဆရာက အျောပွောနပေမေယျ့ အဲဒီလူနာက မကွားလို့နမှော ပွနျဖွသေံ မကွားရဘူး။
နှေးလညျး နောကျလှညျ့ပွီး ဆရာကွညျ့တဲ့ နရော ကွညျ့တော့ ခုံတှပေဲ မွငျရတာမို့ ဆရာ့ မကျြနာကို သခြော ပွနျကွညျ့လိုကျတယျ။ဆရာက နှေးကို မေးဆတျပွရငျး ခုံတှဘေကျ ပွနျကွညျ့နတေော့ နှေးလညျး ကွောငျတောငျတောငျ ဖွဈသှားတာပေါ့။ ” ဆရာ … ဘယျလူနာ ကိုပွောနတောလညျး ” ” ဟာ … ဟိုမယျလေ … အကငြ်္ီအဖွူ ဘောငျးဘီ တို အနကျလေးနဲ့ … ခေါငျးမှာလညျး သှေးတှေ အမြားကွီး ” ဆရာ့ စကားကွောငျ့ နှေး တကိုယျလုံး ဖွနျးကနဲ့ ကွကျသီးမှေးတှေ ထပွီး လနျ့သှားမိတယျ။ ” ဟမျ … နှေးနှေးလှိုငျ … ညညျးက ဘာဖွဈနတောတုနျး … ညညျးပွောနတောနဲ့ … ခုံပျေါက လူနာ ဆငျးပွေးပွီ နမှော ပြောကျသှားပွီ ” ဆရာက ခုံတှဘေကျ ကွညျ့ပွောလိုကျ နှေးဘကျ ကွညျ့ပွောလိုကျပဲ။
” ဟို ဟို …… ဘာ ဘာမှ … မ ဖွဈ ပါ ဘူး ဆရာ ” နှေးအသံ တှေ သိသိသာသာကို တုနျနတေော့တယျ။ ခုနမှ နှေးကို စိုကျကွညျ့ရငျး အသကျထှကျသှားတဲ့ ကောငျးလေးရဲ့ အဝတျစားတှေ တူနပွေီး ခေါငျးကလညျး သှေးထှကျနတေယျ ဆိုလို့လေ။ အဲဒီညက ဆရာ ဦးနိုငျမျောနဲ့ပဲ ည၂နာရီ မထိုးခငျ အထိ အခြိနျဖွုံးမိသှားတယျ။ နှေးကွောကျစိတျတှေ နဲ့ ဆရာရဲ့ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ကာမစိတျတှေ မမြှျောလငျ့ပဲ ဆုံမိကွတော့တာပဲ။ နှေး လကျပျေါ ဆုံးသှားတဲ့ လူနာရဲ့ သှေးသံရဲရဲ မကျြနှာလေး ပွနျမွငျယောငျပွီး စိတျထဲ လနျ့သလိုလို ဖွဈနခြေိနျမှာပဲ နှေး ပါးပွငျလေးပျေါ အနမျးတခု ကရြောကျလာတယျ။
အပွငျမှာ ဆေးရုံဝငျးတခုလုံး မီးလငျးထိနျ နပေမေယျ့ နှေးအခနျးထဲ မီးခြောငျးပိတျပွီး မီးလုံးလေးပဲ ထှနျးထားလိုကျတာ။ ပွတငျးပေါကျ အပွငျက သဈပငျတှေ လတေိုကျတိုငျး ယိမျးနသေလို နှေးကိုယျလုံးလေးလဲ တှနျ့လိမျနရေပွီလေ။ ဆရာဦးနိုငျမျောက အသကျ၆၀ ပွညျ့ပမေယျ့ အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျပဲ ကာမစှမျးအား ရှိနတေုနျးပဲ။ နှေး အိမျထောငျသညျမှနျးလညျး သူသိပါတယျ။ သူလညျး အိမျထောငျသညျ တယောကျပါ ဆရာ ဦးနိုငျမျော အိမျကို နှေးခငျပှနျးနဲ့ ၂ခါလောကျ သှားလညျဖူးတယျ။ လူခငျြး ရငျးနှီးလာတော့လညျး တယောကျ အကွောငျး တယောကျ ရငျဖှငျ့ကွတာပဲလေ။ နှေးကလညျး အသကျအရှယျအရ မိဘ သဖှယျ ဆကျဆံခဲ့တာပါ။ ဆရာက မိနျးမဆုံးတာ ၆နှဈရှိပွီး သား၂ယောကျနဲ့ အတူနတော။
သူ့သားတှကေ နှေးနဲ့ မတိမျးမယိမျးပါပဲ။ နှေးကို ဆေးပညာရပျတှနေဲ့ လကျတှေ့ ကုထုံးတှေ အခှငျ့ရေး ရသလောကျ သခြော သငျပေးနရေငျး တဖွညျးဖွညျးဆရာ့ဘကျက ဆကျဆံရေးက တမြိုးဖွဈလာတာ နှေးရိပျမိတာပေါ့။ တခွား ဆရာဝနျတှရှေေ့ ဆရာ တပွညျ့ ပုံစံမြိုး ဆကျဆံတတျပွီး နှဈယောကျထဲ ရှိခြိနျဆို နှေးနဲ့ ပှတျသီး ပှတျသပျ နခေငျြတာမြိုး။ နှေး ခငျပှနျးက ဒီမွို့လေး ပွောငျးလာကတညျးက ခရီးထှကျတာ မြားနတေော့ နှေးလညျး ဆရာရဲ့ အထိအတှေ့ လေးတှမှော သာယာမိတာ ဝနျခံပါတယျ။ သားအဖ အရှယျနဲ့ ဆရာ တပွညျ့ အနထေားမို့ ဆေးရုံထဲရော ပတျဝနျးကငျြကပါ မရိပျမိကွတာ။ ခုလညျး ဆေးရုံက နှေးအခနျးလေးထဲ ခှဲစိတျခနျး မဝငျခငျလေး မတျတပျရပျ လကျြအနထေားနဲ့ နှေးက ဘီဒိုကှယျပွီး နံရံ ကပျပေးထားတယျ။ နှေးပေါငျကွားထဲ ဆရာက ဒူးထောကျလကျြ အနထေားနဲ့ မကျြနှာအပျပွီး အတှငျးခံ အပွငျဘကျကနေ နှေးဟာလေးကို ယကျပေးနတော။ နှေး အတှငျးခံ ဘောငျးဘီလေး ပေါငျဂှထဲနဈဝငျ နတောပေါ့။
ဆရာ့ လြှာအပွားလိုကျကွီးနဲ့ ဖိယကျပေးနတေော့ တံတှေးရော အရညျကွညျလေးတှရေော ဘောငျဘီးစကို ကပျပွီး နှဟောလေး သိသိသာကို ဖေါငျးကွှလာပွီ။ နှေး အသကျပွငျးပွငျးရှုပွီး မကျြလုံးလေး မိတျထားလိုကျတယျ။ အယကျခံနရေတာက သှေးသားထဲ တဖဉျြးဖဉျြးနဲ့ ခံစားမှု့က ဘာနဲ့မှ မတူအောငျ အရသာတှနေ့မေိတာ။ပေါငျကို မသိမသာ ဖွဲပေးရငျး အားမလိုအားမရ ဖွဈလာလို့ ပေါငျကွားထဲ ဆရာ့ ခေါငျးကို ဆှဲပွီး ကပျထားမိတယျ။ တကယျပါ နှေး ခငျပှနျးနဲ့ ဆကျဆံတာထကျကို ခံစားမှု့က တအားကောငျးနတောလေ။ နှေး ခငျပှနျး ကိုကွီးစိုးမွငျ့နဲ့က ဆကျဆံကာနီး ခဏတဖွုတျ ပါးစပျခွငျးနမျးပွီး ထမိနျကို ဆီးခုံးထိပဲ လှနျပေးရငျး ဆကျဆံလာတာ။ နှေး အိမျထောငျ သကျတမျး တလြှောကျ ဒီလို အရသာမြိုး တခါမှ မရခဲ့ဖူးဘူး။ နှေးကိုယျတိုငျ ခထြားတဲ့ စညျးမို့ ခုခြိနျ ပွငျဖို့ကလညျး အခကျတှနေ့မေိပွီ။ ဆရာ့ကို အတှငျးခံ အပွငျကနပေဲ ယကျခှငျ့ပွုထားတာပါ ဆရာကလညျး နှေးဆန်ဒ အတိုငျး လိုကျနာပွီး ဘောငျးဘီအပွငျကပဲ ယကျနရှောတာ။ တခါမှ မကွုံဖူးတဲ့ အရသာလေးကို နှေး ဖငျကွီးကို ကော့ပေးရုံပဲ တတျနိုငျတော့တယျ။
အကနဲ့ အံကွိတျ ညညျးရငျး ဘောငျးဘီလေးထဲ နှေးကနဲ့ ခံစားလိုကျရပွီ ပေါငျခွံထဲ ဘောငျးဘီကွားက စီးကနြတေဲ့ အရညျတှကေ စေးကပျကပျနဲ့ ခံစား သိရှိနတောပေါ့။ နှေး ပွီးသှားတာနဲ့ ထမိနျ အောကျနားစကို မထားပေးရတာ။ နှေးပေါငျဂှ အတှငျးခံထဲက အရညျရှဲပွီး ဖေါငျးကွှနတေဲ့ နရောလေး ကွညျ့ရငျး ဆရာက သူ့ဘောငျးဘီ ဇဈဖှငျ့ပွီး ဂှငျးထုနတေော့ နှေး မကျြနှာလေး လှဲထားမိတယျ။ ၃မိနဈလောကျကွာမှ ဆရာ ဆီက တအအ တရှီးရှီး ညညျးသံလေး ထှကျလာပွီး ဆရာလညျး အထှဋျထိပျ ရောကျသှားတာပေါ့။ ဆရာ ပငျစငျ ယူသှားတဲ့ အထိ နှေးနဲ့ ဆရာတို့ ၅ကွိမျလောကျ ဖွဈခဲ့ကွတယျ။ အဆုံးထိ မရောကျခဲ့ကွပါဘူး ဆရာ့ ဟာကိုတောငျ နှေး ရဲရဲ မကွညျ့ဖူးဘူး နှေးဟာလညျး ဘောငျးဘီ အပွငျကနပေဲ ဆရာ ကွညျ့ခှငျ့ရတာပါ။
ဆရာ ပငျစငျယူသှားပွီး ၅လ အကွာမှ ဒီမွို့လေး ပွနျရောကျလာရငျး ညနေ တှဖေို့ ခြိနျးတော့ နှေး ရငျခုနျနမေိတာပေါ့။ စားလကျစ ရှမျးခေါကျဆှဲကို လကျစသတျပွီး အခနျးထဲ မှေးနလေိုကျတာ။ အိပျလို့ မရတော့ပါဘူး အတိတျက ပုံရိပျတှေ မွငျယောငျလာတာနဲ့ နှေး အောကျပိုငျးက တဆဈဆဈနဲ့ပါပဲ။ ညနေ မွနျမွနျ ရောကျခငျြမိတာတော့ နှေး ဝနျခံပါတယျရှငျ။ အိပျယာထဲ လူးလိမျ့ရငျး ဘယျခြိနျ အိပျပြျော သှားလညျး မသိဘူး ညနေ ၄နာရီလောကျ နိုးလာခဲ့တာ။ ခကျြခငျြးထပွီး ရခြေိုး အဝတျစားလဲ လိုကျတယျ။ ပွောရမယျဆို နှေးခငျပှနျးနဲ့ ပထမဆုံး အကွိမျ စတှတေဲ့ ခံစားမှု့မြိုးပဲ။ လူကွီးခငျြး သဘောတူပွီး နှေးနဲ့ နှေးခငျပှနျး စတှတေဲ့ခြိနျ အဝတျစားရှေးရငျး ခေါငျးတှေ မူးလာသလိုမြိုး ချချ ချချ။
ခုလညျး နှေးတို့ လငျမယား အိပျခနျးထဲ ကိုယျလုံးပျေါ မှနျရှေ့ ဘျောလီ အနကျလေးနဲ့ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီ အနကျလေးပဲ ဝတျထားပွီး အကငြ်္ီကို တထညျခငျြး နှေးခန်ဓာကိုယျမှာ ကပျကွညျ့နတော။ အကငြ်္ီကွိုကျတော့လညျး ထမိနျက အဆငျမပွေ ကုတငျပျေါ ပဈတငျလိုကျ ဘီဒို ဖှငျ့ပွီး နောကျတထညျ ယူကွညျ့လိုကျပဲ။ နှေး နို့အုံ ဖှေးဖှေးနှဈဖကျက တခြို အိမျထောငျသညျတှလေို တှဲကမြနဘေူး ဘျောလီ ခပျတငျးတငျးလေးထဲ နို့အုံ အပျေါခွမျးလေးက ရုနျးထှကျနတော။ ပေါကျတနျနှဈဖကျကွားက နှေးအတှငျးခံလေးကလညျး အပြော့သားအပါးလေးမို့ အမှေးရေးရေးလေးတှေ သခြောကွညျ့ရငျ မွငျနရေတယျ။
နောကျဆုံးကြ ဖကျဖူးစိမျး ကိုယျကပျြ လကျပွတျလေးနဲ့ ထမိနျစကပျ အညိုရောငျ ဗြောငျလေးပဲ ရှေးလိုကျတော့တာ။ ညနကွေ ဆရာ လာချေါတော့ ဆရာ့ကားလေးနဲ့ပဲ လိုကျလာခဲ့တယျ။ စကားတပွောပွောနဲ့ မီးပှိုငျ ၂ခု ကြျောတော့ အရှေ့ တညျ့တညျ့ ခြိုးမောငျးနရေငျး နှေး ကွိုကျတဲ့ဆိုငျ ပွောဆိုပွီး မေးတော့ နှေးလညျး ဆရာ ကွိုကျတဲ့ဆိုငျ သှားလို့ပဲ ပွောလိုကျတာပါ။ ၁၀မိနဈလောကျ မောငျးလာရငျး အမွနျလမျးမကွီးပျေါ ကားလေး မေးတငျလိုကျတယျ။ ကားရှငျးအောငျ စောငျ့ပွီးမှ တောငျဘကျထဲ ကှပွေီ့း ဆကျမောငျးလာတော့ လမျးအရှဘေ့ကျ ဝငျကာစ နလေုံးကွီးနဲ့ လယျကှငျးတှေ မွငျနရေပွီး လမျးအနောကျဘကျက လူနအေိမျတှပေါ။ အလငျးရောငျ မပြောကျသေးပမေယျ့ တခြို့ ဘီယာဆိုငျတှေ အအေးဆိုငျတှကေ ရောငျစုံမီးလေးတှေ ထှနျးထားကွတယျ။ စကားတပွောပွောနဲ့ မောငျးလာရငျး ခွံဝငျး အကယျြကွီးနဲ့ ဆိုငျရှေ့ လှညျးဘီးကွီး ၂ခု ထောငျထားတဲ့ ဆိုငျရှေ့ ရောကျလာပါပွီ။
အတှငျးထဲ ရောကျတော့ ကားတှေ အမြားကွီး တနျးစီရပျထားပွီး ဂိတျစောငျ့ ကောငျလေး တယောကျ နှေးတို့ ကားနားလေး ရောကျလာတယျ။ ကားထားဖို့ နရော ရှငျးပွပွီး လကျညိုး ညှနျပွနတော။ ခွံဝငျးကွီးထဲ မွကျခငျး အတုလေးတှနေဲ့ စိတျကွညျနုးစရာ ပနျးခွံ အသေးလေး လုပျထားသေးတယျ။ ကားထားပွီး ဆိုငျတံခါး ဖှငျ့ဝငျလိုကျတာနဲ့ နှေး အံအော သှားမိတာပဲ။ အရငျ နှေး ခငျပှနျးနဲ့ ကလပျတှေ သှားဖူး ပမေယျ့ ဒီလောကျ ခနျးနား ကွီးကယျြတဲ့ ဆိုငျမြိုး မရောကျဖူးဘူး။ အထဲရောကျတာနဲ့ ဧညျ့ကွို မိနျးမခြောလေးတှကေ နှေးတို့ကို ပွုံးပွ နူတျဆကျရငျး ဘဲဥပုံ စားပှဲ အဝိုငျး အလှတျ တခုံမှာ နရော ခပြေးနတော။ ခုံပျေါမှာ ဖနျခှကျ အရှညျ ၅လုံးနဲ့ တဈရှူးဗူး ၁ဗူး ပွီးတော့ ရှိနိုငျတဲ့ အစားအစာနဲ့ အရကျအမြိုးစားတှေ ဝိုငျအမြိုးစားတှေ ပါတဲ့ စာအုပျလေး ခပြေးထားတယျ။
ထူးခွားတာက နောကျဆုံး စာရှတျမှ သော့ပုံလေးနဲ့ သီးသနျ့ခနျး အသုံးပွုခငျြသူတှေ အတှကျ ထညျ့ပေးထားတာ။ ဆရာက တရှတျခငျြး လှနျဖတျပွီး အနားရပျနတေဲ့ ဝိတျတာလေးကို အရကျနဲ့ ဝိုငျတခြို့ မှာလိုကျတယျ။ ဝိတျတာလေး စာရငျး မှတျနတေုနျး သီးသနျ့ခနျး မေးကွညျ့တော့ ဒေါငျ့ဆုံး တခနျးပဲ ကနျြတာ ရှငျးပွနတော။ ရတဲ့ အခနျးယူမယျ ပွောတော့ ဧညျ့ကွို မိနျးကလေး ၂ယောကျ ရောကျလာပွီး နှေးနဲ့ ဆရာ့ကို သီးသနျ့ခနျးထဲ လိုကျပို့ကွတာပေါ့။ အဲဒီအခနျးရောကျမှ စားစရာတှေ ထပျမှာရငျး ဧညျ့ကွိုးလေးတှကေ မှာစရာရှိရငျ စားပှဲခုံပျေါက ခလုပျလေး နှိပျချေါဖို့နဲ့ ဆကျရှငျ ပွညျ့လို့ ထပျယူခငျြရငျ နှိပျရမယျ့ ခလုပျလေး ခှဲခွား ရှငျးပွပေးသေးတယျ။ မှာထားတဲ့ အရကျနဲ့ ဝိုငျတှေ စားစရာတှေ ရောကျလာတော့ အခနျးတံခါးက အလိုလို ပွနျပိတျသှားပွီး စားရငျး သောကျရငျး အရငျက အကွောငျးတှေ ပွနျပွောတော့ နှေးလညျး စိတျပြျောရှငျ လာတာပေါ့။
အစုံပါပဲ နှေးတို့ သရဲ ခြောကျခံရတာတှရေော ဆရာ့ နူတျဆကျပှဲည သီခငျြးဆိုရငျး မူးပွီး ကကွတာတှရေောပဲ။ တဖွညျးဖွညျး နှေးလညျး ရီဝဝေေ ဖွဈလာရတယျ အိမျထောငျရေးကွောငျး ပွောဖွဈတော့ ဆရာက နောကျအိမျထောငျ မပွုပဲ သားတှေ ခြှေးမတှနေဲ့ပဲ အတူနကွေောငျး ပွနျပွောပွနတော။ နှေး လညျး ခငျပှနျးနဲ့ ခဏတိုငျး ခှဲနရေပမေယျ့ အိမျထောငျရေး အဆငျပွကွေောငျး ပွနျပွောပွလိုကျ ပါတယျ။ ခုလညျး နှေးခငျပှနျး ခရီးထှကျသှားကွောငျး ပွောတော့ ဆရာ မကျြလုံးတှေ အရောငျ တာကျလာတာ။ဘေးတိုကျ ထိုငျနရေငျး နှေးရှေ့ မတျတပျရပျလကျြ အနထေားနဲ့ ငုံ့ပွီး နှေးနူတျခမျး ကို ဆှဲစုပျနတေယျ။ ရုတျတရကျ နှေးလညျး ကွောငျသှားတာပေါ့။ နှုတျခမျးခငျြး တစေု့ပျရငျး ဆရာ့ လကျတဖကျက နှေး အကငြ်္ီပျေါကနေ နို့အုံကို ညှဈနပွေနျရော။ နို့အုံညှဈခရြေငျး နှေးလြှာကို မလှတျတမျး စုပျနတေော့ အသကျရှုကွပျပွီး မောလာရတယျ။
နှေး နူတျခမျးခငျြး ခှာလိုကျတာနဲ့ နှေး ခြိုငျးနှဈဖကျကနေ ဆှဲမပွီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျ အနထေားနဲ့ ခပျတငျးတငျး ဖကျပွီး လညျတိုငျတှေ ဆှဲစုပျပွနျရောပဲ။ ” နှေး … ဆရာကို … အရငျ အခှငျ့အရေးလေး ပေးဦးနျော … အမှနျတော့ နှေးနဲ့ တှခေငျြလို့ … ဆရာ ဒီကို ရောကျလာတာပါ ” ဆရာ့ စကားက နှေးရငျကို သိမျ့ကနဲ့ ခံစားမိစပေါတယျ။ လညျတိုငျပြောလေး ဆှဲစုပျနရောကနေ နှေးရှေ့ ဒူးထောကျထိုငျခရြငျး စကပျထမိနျ အောကျနားစလေးကို ဆှဲမနတော။ ထမိနျက အတှငျးဘကျ ဒူးအထကျနားထိ ခှဲထားတာမို့ အနားစကို ပွနျခရြငျး အကှဲနရောကနေ ဆှဲဖွဲတော့ နှေးပေါငျတနျ ဖှေးဖှေးလေး ပျေါလာတာပေါ့။ အရငျလိုပါပဲ ပေါငျအတှငျးသားလေးတှေ နမျးပွီး နှေးဟာလေးကို အတှငျးခံ ဘောငျးဘီ အပွငျကပဲ ယကျပေးနတေယျ။ နှေးစိတျတှေ ဆေးရုံပျေါက အခနျးထဲ ပွနျရောကျသှားသလိုပါပဲ။ မကွာပါဘူး နှေး အရညျတှေ ထှကျကလြာတာ။
ဒီတခါ ပေါငျခွံထဲ စီးကလြာတဲ့ အရညျတှေ လြှာနဲ့ပငျ့ယကျပွီးမှ ထရပျလိုကျတယျ။ နှေးလညျး ဆရာ ဘာဆကျလုပျမလဲ ဆိုတာ သိနတေော့ ပေါငျလယျထိ ခှဲထားတဲ့ စကပျထမိနျကို မပွီးဖွဲလိုကျရငျး နှေးပေါငျဂှကို ဆရာ မွငျအောငျ ပွထားလိုကျတာ။ နှေးနူတျခမျး လာနမျးလို့ ပွနျနမျးပေးတော့ ဆရာ့ပါးစပျက နှေး စောကျရညျ အနံ့လေး ပွနျရနတေယျ။ နမျးနရေငျး ဆရာ့ ဘောငျးဘီ ဇဈဖှငျ့တော့ အတှငျးခံထဲ ဖောငျးကွှနတေဲ့ အရာကွီး မွငျတာနဲ့ နှေး မကျြနှာလှဲပဈလိုကျတာပေါ့။ ခဏလေးပဲ ဆရာလညျး စိတျတအား ကွှနပေုံပါ အားကနဲ့ အံကွိတျသံ ပျေါလာလို့ နှေး နောကျဆုတျလိုကျပမေယျ့ ထမိနျပျေါ ဖွူဖွူပဈြပဈြတှေ ပနျးခံလိုကျရတယျ။နှေး ကြောပေးပွီး ခုံပျေါက တဈရှုးတလှာဆှဲယူပွီး ထမိနျပျေါက အရညျတှေ သုတျပဈလိုကျတာပေါ့။
” ဆောရီး … နှေးရယျ … ဆရာ သတိလှတျသှားတာပါ … ဟိုး အရငျလို … ဘေးကို ပနျးထုတျရမှာ … မသှေ့ားတယျ ” ” အငျးပါ … ဆရာရဲ့ … ရပါတယျ ” ဆရာလညျး ဘောငျးဘီ ဇဈပွနျပိတျ နှေးလညျး အကငြ်္ီကို ပွနျဆနျ့ရငျး စကပျထမိနျကို ဆှဲဆနျ့လိုကျတာ။ ခုံပျေါ ပွနျထိုငျပွီး လကျကနျြ အရကျနဲ့ ဝိုငျတှေ ဆကျသောကျကတြာပေျါ့။ နှေး အတှကျ ဝိုငျက ကုနျသှားပမေယျ့ ဆရာ့ အရကျတှကေ ကနျြနသေေးတာ။ ဆရာ့ကွညျ့တော့လညျး မူးနတေဲ့ ပုံမို့ အပွနျကားမောငျးရငျ အန်တရယျ မဖွဈအောငျ ဆကျမသောကျဖို့ တားထား လိုကျတယျ။ ရမ်မကျစိတျက မကသြေးပဲ ပွနျထလာတော့ ဆရာ့ လကျက နှေးပေါငျကွားတဲ့ ပွနျရောကျလာရောပဲ။
ဒီတခါတော့ နှေးကစပွီး နူတျခမျးခငျြး တစေု့ပျပဈလိုကျတာပါ။ နူတျခမျးခငျြး စုပျရငျး ပေါငျနှဈဖကျ ဖွဲပေးလိုကျတာနဲ့ နှေးဟာလေးက အရညျကွညျတှေ စိမျ့ကလြာတယျ။ ဘောငျးဘီ အပွငျကနပေဲ ဆရာ့ ညာလကျက လကျခြောငျးတှေ အထကျအောကျ ပှတျသပျ ပေးနတေုနျး လှတျနတေဲ့ ဘယျလကျက နှေး လကျတဖကျကို ယူပွီး သူ့ပေါငျကွားထဲ ဆှဲ သှငျးလိုကျတာ။ နှေး လကျဖဝါးထဲလညျး ဆရာ့ ဟာက အရညျထှကျပွီး တာတောငျ မပြော့ပဲ မာထငျနတေုနျးပဲ။ဆရာ့ လကျခြောငျးလေး တခြောငျးက နှေး ဟာလေးထဲ ဖိထညျ့တော့ ဆဈကနဲ့ အရညျကွညျတှေ စိမျ့ထှကျလာပွီ။ လကျကလေးက မှနေပေမေယျ့ ဘောငျးဘီ ခံနတေော့ အတှငျးထဲ လကျတဆဈပဲ ရောကျတယျ။ တဗှိဗှိကနဲ့ အသံလေး ထှကျလာရငျး နှေး အစိလေး မာထငျပွီး ထောငျနတေော့တာပဲ။ဆရာ့ လကျခြောငျးလေး အပျေါနဲနဲရှလေ့ာရငျး ဝိုငျးပွီး ဖိခပြေေးတော့ နှေး နရေထိုငျရ ခကျလာတာပေါ့။
ခါးအောကျပိုငျး ကငျြတကျလာတယျ။ လကျခြောငျး ထိပျလေးက ဖိခရြေငျး အားပွငျးလာလိုကျ ပြော့သှားလိုကျနဲ့ အဆကျမပွတျ လုပျပေးနတေော့ ဘယျလိုကွီးမှနျးမသိဘူး တခုခုကို တောငျးတ လာသလိုပါပဲရှငျ။ ” တီတီ တီတီ …… တီတီ တီတီ ” အဲဒီခြိနျ ဆကျရှငျ ပွညျ့သှားလို့ မီးနီလေး လငျးပွီး တတီတီနဲ့ အသံလေး မွညျလာတော့တယျ။ နှေး စိတျထဲ အားမလို အားမရ ဖွဈနရေငျး ဆရာ့ ဟာကွီးကို ဘောငျးဘီ အပွငျက နပေဲ ခပျတငျးတငျး တခကျြ ညှဈပွီး လှတျပေးလိုကျရတာပေါ့။ ဆရာက ထပျနမေလား မေးပမေယျ့ ဆေးရုံ ဂြူတီ ရှိနလေို့ ပွနျလာခဲ့လိုကျတာပါ။ နှေး အိမျရောကျတဲ့ အထိ ကလပျမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ အထိအတှတှေ့ကေ ကပျပါလာတုနျးပဲ။ မီးလုံးတှေ ပွနျပှငျ့လာလို့ နှေးနဲ့ ဆရာနဲ့ ဆကျမကွိုးစားတော့ပဲ ရပျပွဈခဲ့ရတာလေ။
ဆရာ အိမျပွနျပို့ပေးတော့ နှေး သောကျခဲ့တဲ့ ဝိုငျက အစှမျးပွတော့တာပေါ့။ကားထဲက ဆငျးကတညျးက ဆရာ့လကျမောငျးကို ဆှဲထားလိုကျရတာ။ ခေါငျးတှေ တရိပျရိပျ ရငျထဲ တလှပျလှပျနဲ့ မူးလာပွီး ဆရာ့ကို အိမျသော့ပေး ဖှငျ့ခိုငျးရငျး ၂ယောကျသား ဝငျလာခဲ့ရတော့တယျ။ အလငျးရောငျ ပြောကျကှယျပွီး အမှောငျထု ကွီးဆိုးခြိနျမို့ အိမျထဲ မှောငျမှောငျမဲမဲနဲ့ပါ။ နှေးကတော့ ကိုယျ့အိမျကိုယျ မကျြစိမိတျပွီး လြှောကျလို့ရပမေယျ့ ဆရာ့ကတော့ စမျးတဝါးဝါးနဲ့ပါ နှေးတို့ လငျမယားခနျးထဲ ဆရာ့ကို ပါးစပျက ညှနျပွပေးလိုကျရတယျ။ အိပျခနျးထဲ ရောကျတော့ ဆရာ့ကိုပဲ မီးခလုပျ ဖှငျ့ခိုငျးရငျး သတိအလှတျမခံပဲ ဆေးရုံကို ဒီနေ့ ဂြူတီ မလာနိုငျကွောငျး ဖုနျးဆကျပွီး ရခေဲသတ်ေတာ ထဲက ရတေဗူး ယူသောကျလိုကျတာ။ မီးဖှငျ့ မထားခဲ့တော့ ရကေလညျး မအေးပွနျဘူး။ အခနျးထဲ ရောကျကတညျးက နှေးကိုနှေး အနိုငျနိုငျ ထိနျးရငျး လုပျနတောတှကေို ဆရာက ထိုငျကွညျ့နတေုနျးပဲ။
မူးတဲ့အရှိနျက မွငျ့လာတာနဲ့ အိပျယာကို မခငျးနိုငျတော့တာ။ ဆရာကို ပွနျဖို့ နူတျဆကျမိလား မဆကျမိလား မသိတော့ပါဘူး ကုတငျပျေါ ထိုးအိပျပဈလိုကျတာပဲ။ ဘယျလို အိပျပြျောသှားမှနျး မသိဘူး အတျောလေးကွာမှ ရမှေေးနံ့ရော ခြှေးနံ့ရော ရလိုကျလို့ မကျြလုံး ဖှငျ့ကွညျ့မိတယျ။ နှေး ဆရာနဲ့ ကလပျက ပွနျလာတဲ့အတိုငျးပဲ အဝတျစားက ရောကျတာနဲ့ အိပျပဈတော့ တရေးနိုး အမူးပွကောစလေးပေါ့။ ခြှေးနံ့က နှေးခငျပှနျး ခြှေးနံ့မဟုတျတာ ခကျြခွငျးသိလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နှနေဲ့ တအိပျယာထဲ အတူနတောက ဘယျသူလဲ အမွနျ စဉျးစားလိုကျတော့ မကျြလုံး ပွူးသှားရတယျ။ ဟုတျတယျလေ နှေးကို ပွနျလိုကျပို့တာ ဆရာ ဦးနိုငျမျောလေ ဒါဆို သူ မပွနျသေးတာနမေယျ။
နှေး တှေးမိတာနဲ့ မကျြလုံးတှေ အားယူပွီး အကွညျ့ ရှလေို့ကျတာပေါ့။ သခြောတယျ နှေးတို့ လငျမယား အိပျခနျးလေးထဲပါပဲ မီးရောငျရောကျ ကုတငျပျေါမှာ နှေးက ကိုယျတစောငျး အနထေားနဲ့ နှေး ဗိုကျနားလေး မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တငျပလှဲ ဝငျထိုငျနတောက ဆရာ ဦးနိုငျမျောပါ။ နှေး စကပျထမိနျ ပေါငျလယျထိ ခှဲထားတဲ့ နရောလေးက လှနျနပွေီး ပေါငျတနျတုတျတုတျ ဖှေးဖှေးလေးက ထပျလကျြလေး ပျေါနတောပေါ့။ ဆရာက နှေး ပေါငျဂှလေး ကွညျ့ပွီး ဟိုးအရငျကလိုပဲ သူ့ပေါငျကွားက ဟာကို ခပျဖှဖှ ပှတျသပျနတော။ ဆရာ့ ပေါငျကွားက ဟာကွီး အနီးကပျမွငျတော့ နှေး သှေးသားတှေ ဆူပှကျလာတယျ အာခေါငျတှေ ခွောကျကပျလာပွီး ရငေတျလာသလို ခံစားလာရတာပဲ။ ဆရာကတော့ နှေး နိုးနတော မသိပါဘူး နှေးပေါငျဂှလေးကို စူးစိုကျကွညျ့နတောပါ။ နှေး ဆရာ့ ဟာကွီးကို အနီးကပျ မကွညျ့ရဲလို့ အိပျရငျးနဲ့ ကိုယျလုံးလိမျ့သလို လုပျပွပွီး ကြောပေးထားလိုကျ မိတယျ။
မကွာပါဘူး နှေး ဘယျဘကျခွထေောကျပျေါ တငျထားတဲ့ ညာဘကျခွထေောကျကို ဆရာက ဒူးခေါကျကှေးက ကိုငျပွီး အပျေါ တှနျးတငျနတော။ နှေးဝတျထားတဲ့ အညိုရောငျဗြောငျ ထမိနျစကပျက အပြော့သားမို့ ဆရာ ဆှဲလှနျတော့ ပေါငျလယျ အကှဲနရောလေးထဲက ပေါငျတနျတှေ ပျေါလာတယျ။ ဘယျဘကျခွထေောကျအောကျ ထမိနျစက ဖိထားလို့ ကနျြနပေမေယျ့ ညာဘကျဒူးကှေးတငျခံရတဲ့ ဘကျက ခါးထိ လှနျတကျလာပွီး နှေး ခါးပျေါ ဆရာ့ နှာခေါငျးက ထှကျတဲ့ အငှနှေ့ေးနှေးလေး ကရြောကျနပွေနျရောပဲ။ နှေးဖငျကွီးက မိနျးမခငျြးတောငျ ငေးယူရတာမို့ ဘေးတစောငျး လှညျ့အိပျလိုကျတော့ ခှကျနတေဲ့ ခါးလေး အောကျ ဖငျသားစိုငျကွီးက ဆရာ့ဘကျ ပဈပွထားသလို ဖွဈနမှော သခြောတယျ။
တှေးမိရုံနဲ့ စိတျထဲ ရှိနျးကနဲ့ ဖွဈလာပွီး အောကျက အရညျကွညျလေး စိမျ့ထှကျလာရတယျ။ဆရာ့လညျး နှေးဖငျကို အနီးကပျ ကွညျ့ရတာ စိတျလှုပျရှားနပေုံပါ အသကျရှုသံတှေ ပငျြးလာတာ ကွားနရေတယျ။ နှေးက ကိုယျတစောငျး အနထေားမို့ ဆနျ့ထားတဲ့ဘယျဘကျပေါငျနဲ့ ဒူးကှေးထားတဲ့ ညာဘကျပေါငျကွား ဆရာက ဒူးထောကျ ဝငျထိုငျနပွေီ။ ဆရာ မကျြလုံးတှကေ နှေး အောကျပိုငျးပဲ ကွညျ့နတောလေ နှေးခိုးကွညျ့နတောကို သတိထားမိပုံ မပျေါပါဘူး။ စိတျလှုပျရှားနရေငျး နှေးခါးပျေါထိ လှနျတကျနတေဲ့ စကပျထမိနျ အောကျနားစကို မပွီး အတှငျးခံ ဘောငျးဘီ မြော့ကွိုးလေးကို ဟကွညျ့တော့ လကျတှေ တုနျနရှောတာ။ ခဏနတေော့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခလြိုကျဟနျနဲ့ နှေးခါးကို တှနျးပွီး ပကျလကျအနထေား ဖွဈအောငျ လုပျလိုကျတာပဲ။
နှေး အလိုကျသငျ့ ကိုယျလုံးကို လှနျပေးနမေိတာပါ ပကျလကျအနထေား ရောကျတော့ စကပျခြိတျကို ဆှဲဖွုတျပွီး အောကျကို မရမက ဆှဲခြှတျပဈတယျ။ ထမိနျကြှတျတာနဲ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီ ကိုပါ လိပျခြှတျပဈတာ ခပျကွမျးကွမျးပဲ နှေး နိုးလာလညျး ရငျဆိုငျမယျ့ ပုံစံ ပွောငျးသှားပါပွီ။ နှေး အဖုတျလေးကို လကျနဲ့ ဖွဲပွီး ပှတျသပျနတေော့ တဈမြိုးကွီးပဲ အားမလို အားမရဖွဈနရေတယျ။ အမှနျအတိုငျး ဝနျခံရရငျ လကျနဲ့ ဆကျမလုပျ စခေငျြတော့ဘူး။ ပါးစပျနဲ့လကျြပေးတာ နှေး ပိုပွီး နှဈခြိုကျတာပါ။ တျောပါသေးရဲ့ နှေး တောငျးတတုနျး အစိလေးကို ဖိခရြေငျး ဖငျဝနဲ့ အခေါငျး ပေါကျလေးကွား လြှာဖြားနဲ့ ထိုးစှနတေယျ။ ပွီးမှ လြှာလေးက အပျေါတကျလာပွီး အစိနားလေးထိ ယကျပေးနတော။
ဘောငျးဘီ မခံထားတော့ ဆရာ့ လြှာနဲ့ နှေးဟာလေး အသားစိုငျခငျြး ဒါရိုကျ ထိတှတေ့ော့ အရသာက ပိုကောငျးနတေယျ။ ” အားးးး … အ …… ဆရာ ရယျ ” နှေး အိပျခငျြယောငျ ဆောငျရငျး ထိနျးမရတော့ပါဘူး။ နှေး အိမျထောငျသကျတမျး တလြှောကျ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဆီကတောငျ မရဖူးတဲ့ အရသာလေးလေ။ နှေး ညညျးသံလေးကွောငျ့ မကျြနှာကို တခကျြ လှမျးကွညျ့ရငျး ပွနျယကျပေးတော့ လှုပျရှားမှုတှကေ ပိုမွနျလာတယျ။ ” အဟငျ့ … ဟငျ့ ” အလိုလိုနရေငျး မကျြရညျလညျလာပွီး ဝမျးနညျးလာသလိုပဲ ဆရာ့ကို ကွညျ့တော့ မကျြလုံးခငျြးဆုံနကွေတာ ဆရာလညျး နှေး ရှိုကျသံကွောငျ့ ယကျပေးနရောက ရပျပွီး နှေးမကျြနှာကို လှမျးကွညျ့နပေုံပါ။ နှေးကို စိုကျကွညျ့ပွီး အစိလေးကို ပါးစပျထဲ စုပျယူရငျး အထဲရောကျမှ လြှာဖြားနဲ့ ထိုးစှပေးနတော။
မိနျးမတယောကျရဲ့ ကာမအရသာ ပေးစှမျးနိုငျဆုံး အစိလေးကို ပါးစပျထဲထညျ့ စုပျနတေော့ နှေး တကိုယျလုံး ဆရာ့ ပါးစပျထဲ ရောကျသှားသလိုပါပဲ။ အသံထှကျ ညညျးခငျြပမေယျ့ မထှကျအောငျ မနဲ ထိနျးထားရတယျ။ နှေး ကာမစိတျ ပွငျးထနျနတော ဆရာ မသိစေ ခငျြဘူး။ ပါးစပျထဲ အစိလေးကို ထိတယျ ဆိုရုံလေး လြှာနဲ့ ဝိုကျပွီးမှ ဆှဲစုပျပေးနတေော့ နှေး ပေါငျတနျတှေ တဆကျဆကျ တုနျလာတော့တာ။ ရငျတှေ တဒုတျဒုတျ ခုနျပွီး လှိုငျးစီးနရေသလိုပေါ့။ ကိုယျလုံးလေး နိမျ့သှားလိုကျ မွငျ့လာလိုကျနဲ့ မောဟိုကျနပွေီ။ နှေး ပွီးခငျြလာပွီ ဒီခံစားမှု့ကို ထိနျးထားရတာလဲ ပငျပနျးနပွေီ။
” အ …… အမလေးးးး … ရှီးးးး … မ မ မ ရ တော့ ဘူး … ဆရာရယျ …… ထှကျ ကုနျ ပွီ ” တှေးနတေုနျး နှေး အရညျတှေ ပနျးထှကျရငျး လူတကိုယျလုံး ခြောကျထဲ ထိုးကသြှားသလိုပဲ။သတိထားပွီး ထိနျးလိုကျပမေဲ့ ခွဖြေားထိပျတှေကော့တကျသှားပွီး လကျနှဈဖကျက ဆရာခေါငျးကို ဆှဲရငျး နှေး အဖုတျလေးနဲ့ ကပျထားမိတာ။ အသကျမြှငျးရှုပွီး အနားယူနတေုနျး ဆရာက သူ့ဘောငျးဘီ ခြှတျရငျး အတှငျးခံကို တဆကျတညျး ဆှဲခြှတျပဈတယျ။ အသားဖွူပမေယျ့ ပေါငျကွားထဲ ဆရာ့လီးက နီညိုရောငျ သနျးနပွေီး နှေးခငျပှနျး ကိုကွီးစိုးမွငျ့ လီးထကျ အတုတျရော အရှညျရော သာနတောပဲ။ တခကျြ နှဈခကျြ စှလိုကျတာနဲ့ ဆရာ့ လီးကွီး အကွောတှေ ထငျးလာပွီး ထောငျမတျလာတယျ။ နှေး ပေါငျကွားထဲ ဒူးထောကျနရော ယူတော့ နှေး အသကျပွငျးပွငျး ရှုထားလိုကျတာ။
နှေးအဖုတျလေး တငျးကနဲ့ ဖွဈသှားပွီး ခွထေောကျ အကွောတှေ လှုပျမရအောငျ ခံစားလိုကျရတယျ။ ” အဟငျ့ ဟငျ့ … အဲတာတော့ မလုပျပါနဲ့ ဆရာရယျ … နှေး … ခှငျ့ မပွုခငျြဘူး … အထိအတှမှေ့ာ … သာယာပမေယျ … အဆုံးထိ မသှားခငျြဘူး ဆရာ … ဟငျ့ ဟငျ့ ” နှေးကသာ ပွောနတော ဆရာက နောကျမဆုတျ တော့ပါဘူး တရဈခငျြး နှေးဟာထဲ ဖိထညျ့နတော။ ” ခုမှတော့ မထူးတော့ ပါဘူး နှေးရယျ …. ဆရာ … မထိနျးနိူငျတော့လို့ပါ ” ဆရာ့လီး အတှငျးထဲ ဖွညျးဖွညျးခငျြး တိုးဝငျလာပွီး ဆီးခုံးခငျြး ကပျတာနဲ့ အထဲက နာကငျြလာလို့ သကျသာလို သကျသာညား ခေါငျးကိုမော့ပွီး ရငျဘတျလေး ကော့လိုကျမိတယျ။
နှေး ရငျကော့လိုကျတာနဲ့ ဖကျဖူးစိမျးရောငျ ကိုယျကပျြအကငြ်္ီလေးရဲ့ အောကျနားစကို လညျပငျးနားထိ ပငျ့တငျပဈတာ။ ဆရာ့ လကျတှကေ အပျေါတကျလာပွီး နှေးရဲ့ ဘျောလီအလယျကို လကျနဲ့ အောကျကို ခြိတျဆှဲ ခလြိုကျတာ။ နို့အုံ နှဈဖကျလုံး ရုနျးထှကျလာတော့ အောကျဆှဲခထြားတဲ့ ဘျောလီက ပငျ့ထိနျးပေးသလိုဖွဈပွီး နို့အုံတှကေ ပွူးထှကျလာတယျ။
နှေးထငျတာ ပါးစပျနဲ့ စို့ပေးမယျ ထငျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ လကျညိုးနဲ့ လကျခလယျ ကွားထဲ နို့သီးခေါငျးကို ညှပျပွီး လကျဖမိုးက နို့အုံကို ဖိပှတျနတေော့ ခံစားမှု့က တမြိုးလေးပဲ။ အရသာ အသဈလေး ခံစားနတေုနျး လကျဖမိုး ပွနျမှောကျရငျး လကျညိုးနဲ့ လကျမကိုသုံးပွီး နို့သီးခေါငျးကို ညှဈခပြေဈတယျ။ နို့သီးခေါငျးလေး ကြိနျးလာပမေယျ့ ခံစားမှု့က ကောငျးလာလို့ အသံထှကျ ညညျးပွီးမှ ရှကျမိနတော။ နှေး အထဲက ဆရာ့ လီးက မလှုပျရှားသေးဘူး အတှငျးထဲ သပျလြိုထားသလို လှုပျလို့လဲ မရသေးဘူး။ နို့သီးခေါငျးလေးတှေ ယားလာပွီး မသိမသာ ကော့ပေးတော့မှ ဆရာက သူ့ဟာကို ခပျဖွညျးဖွညျး အသှငျးအထုတျစလုပျလာတယျ။ အထဲဝငျလာတိုငျး နှငျ့နအေောငျခံစားရပွီး ပွနျထှကျသှားတိုငျး ဟာပွီး ကနျြနရေဈတာပဲရှငျ။
နှေး ခံနိုငျလာတော့ ခပျကွမျးကွမျး ပဈဆောငျ့လာတယျ။ ဆောငျ့ခကျြတှေ အတိုငျး နှေး နို့နှဈလုံးကလညျး အောကျက ဘျောလီထိနျးထားတာတောငျ လှုပျရမျးနတေော့တာပဲ။ ရုတျတရကျ ဆရာက ဆောငျ့ခကျြတှေ ရပျပွီး နို့သီးခေါငျး တဖကျကို ငုံ့ပွီး ဆှဲစုပျတော့ နှေး ကြောပွငျပါ ကော့တကျသှားမိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အထဲက တငျးကွပျတဲ့ ခံစားမှု့က လြော့မသှားသေးဘူး။ အောငျ့ခံနတေဲ့ နှေး မကျြနှာကို ကွညျ့ပွီး ဆရာက သဘောတှေ့နပေုံပဲ။ ရရှိလာတဲ့ ခံစားခကျြကို နှေး ဘယျလိုတုနျ့ပွနျရမှနျး မသိပါဘူး နို့စို့ရငျး ဆောငျ့လုပျပေးတဲ့ အရသာက နှေးအတှကျ ကောငျးလှနျးလို့ သေးတောငျ ထှကျခငျြလာတာ။ ဘယျလိုမှ ထိနျးမရတော့လို့ အသံကယျြကွီး အျောပွီး ညညျးပဈလိုကျတယျ။ ဆရာ အစိကို လြှာနဲ့ ယကျပေးတဲ့ အရသာနဲ့မတူတဲ့ ခံစားမှု့တှကေ နှေး သှေးသားတှေ ဆူပှကျစတော။နို့စို့ခံရငျး အတှငျးသားထဲ လီးရဲ့ အရညျပွားနဲ့ ထိပျခေါငျးက ခြိတျဆှဲ ပှတျတိုကျမှု့တှေ တဈပွိုငျနကျထဲ ခံစားလိုကျရတယျ။
တောငျ့မခံနိုငျတော့ဘူး လကျနှဈဖကျက အိပျယာခငျးတှေ ကဈြနအေောငျ ဆုပျကိုငျထားရငျး နှေး ဖငျကွီး လပေျေါ အလိုလို မွှောကျတကျ သှားရတာပေါ့။ အရညျတှေ အဆကျမပွတျ ထောငျပနျးပွီးမှ အရုပျကွိုးပကျြသလို ဘုံးကနဲ့ ကုတငျပျေါ ဖငျသားစိုငျကွီး ပွနျကလြာတယျ။ နှေးကိုယျလုံးလေး တှနျ့လိမျပွီး ခဏအကွာမှ ငွိမျကသြှားတော့တာ။ နှေးငွိမျသှားတာနဲ့ ဆရာ့က အဖုတျထဲ စိမျထားထဲ သူ့လီးကို ထုတျပွီး ဘယျလကျလကျကို နှေး ရငျဘတျဘေး တံတောငျဆဈနဲ့ ကှေးထောကျပွီး နို့သီးခေါငျးတှေ ပွနျစို့နတော။ အားရပါးရစို့ရငျး နို့သီးခေါငျးလေးကို မနာအောငျသှားလေးနဲ့ ခဲလိုကျတော့ နှေး တုနျကနဲ့ ဖွဈသှားရောပဲ။ ဆရာခေါငျးက ဆံပငျတှကေို ဆှဲဆုပျကိုငျရငျး နို့နဲ့ ပါးစပျ ကပျထားပွီး မကျြလုံးလေး မိတျထားလိုကျတယျ။ ” နှေး … ဆရာ့ကို လေးဘကျကုနျးပေးပါလား ” ” အိုရျ … ဆရာကလညျးနျော ” နို့စို့တာရပျပွီး ပွောလိုကျတဲ့ ဆရာ့ စကားကွောငျ့ နှေး ရှကျမိသှားတယျ။
ခငျပှနျး မဟုတျတဲ့ သူစိမျးယောကငြ်္ားရှေ့ နှေးဖငျကွီး ကုနျးထားရမှာ တှေးမိရုံနဲ့ ရှကျလညျးရှကျ အဖုတျလေးထဲကလညျး ဆဈကနဲ့ ဆဈကနဲ့ ခံစားလိုကျရတာပေါ့။ ” လုပျပါ … နှေးရယျ … အဝေးကွီးက လာရတဲ့ … ဆရာ့ကို မသနားဘူးလား ” ဆရာက ကလေး တယောကျလို ပူဆာနလေို့ နှေး လိုကျလြောပေးလိုကျပါတယျ။ နှေးပွီးသှား ပမေယျ့ ဆရာ မပွီးသေးတာ ရိပျမိတာပေျါ့။ ဆရာ့ လီးကွီးကို နှေး ကွိုကျသှားတော့ ရှကျလညျးရှကျ ခံလညျးခံခငျြတာနဲ့ မကျြလုံးကို မိတျထားလကျြလေးပဲ ခေါငျးငွိမျ့ရငျး ကုနျးထလိုကျတာ။ နှေး လေးဘကျကုနျးပေးတော့ ဆရာ့ လီးကွီးက အဖုတျထဲ နောကျကနေ ခပျစီးစီးလေး ပွနျဝငျလာခဲ့တယျ။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး အသှငျးအထုတျ လုပျရငျး အရှိနျရလာတော့ နှေး ခါးလေးကို စုံကိုငျပွီး နောကျကနေ မနားတမျး ဆောငျ့လုပျတော့တာပဲ။ ဆရာ့ လီးကွီး နှေး အဖုတျလေးထဲ တဘှတျဘှတျနဲ့ ဝငျထှကျနပွေီ။ ခံလို့ကောငျးပမေယျ့ တခကျြတခကျြ တိုးဝငျလာတဲ့ လီးထိပျက သားအိမျဝ လာဆောငျ့တော့ ခေါငျးအုံးကို ဆုပျကိုငျပွီး ပါးစပျကလညျး တအားအားနဲ့ အံကွိတျခံနရေတယျ။
အတျောကွာကွာလေး အလုပျခံပွီးမှ နှေး ဟာလေးထဲ ပူကနဲ ဆရာ့ အရညျတှေ ဝငျလာတော့တာ။ ဆရာလညျး အားကနဲ့ ညညျးရငျး နှေးခါးကို ဆှဲပွီး နှေးဖငျကို ဆီးခုံးနဲ့ ဖိကပျထားရငျး အရညျတှေ အကုနျ ညှဈထညျ့ ပွီးမှ သူ့လီးကွီး ဆှဲထုတျသှားတယျ။ ခဏနားပွီး ဆရာပွနျမယျ ထငျနတောပေါ့။ ပကျလကျအနားယူရငျး နှေးပေါငျကွားထဲ လကျနဲ့ပှတျပွီး ပွောလိုကျတဲ့ စကားကွောငျ့ နှေး အံအော သှားခဲ့ ရတယျ။ ” နှေး … ဆရာ ဒီမှာပဲ … ညအိပျလိုကျမယျ … နှေးခငျပှနျး … ပွနျမလာသေးဘူး မလား ” ” နောကျ … ၃ရကျလောကျ ကွာဦးမယျ … ပွောတယျ ဆရာ … အိပျခငျြ အိပျသှားလေ ” ဆရာက သူ့ကားနောကျခနျးက အဝတျအိတျလေး ယူပွီး အိပျခနျးထဲ ပွနျဝငျလာတယျ။ နှေးတို့ လငျမယား အိပျတဲ့ ကုတငျပျေါမှာပဲ ဆရာနဲ့ နှေး အတူအိပျလိုကျကွတာ။ နှေး တညလုံး ဆရာမြား ထပျစဦးမလားလို့ မြှျောလငျ့ မိပမေယျ့ သူနတေဲ့မွို့ကနေ ဒီထိ ကားမောငျးလာလို့ ပငျပနျးရှာတာနမေယျ တခူးခူးနဲ့ ဟောကျပွီး အိပျတော့တာပဲ။ နှေးဘဝ ပထမဆုံး အကွိမျ သူစိမျးယောကငြ်္ားနဲ့ အတူအိပျဖူးတာပါ။
မနကျလငျးတော့ နှေး ဆရာ့အတှကျ မုနျ့နဲ့ ကျောဖီ အဆငျသငျ့ လုပျထားလိုကျတယျ။ ညက သောငျးကနျြးမိလို့ နှေးကိုယျလုံးက အနံ့ထှကျနတောနဲ့ ရခြေိုးဖို့ စဉျးစားလိုကျတာ။နှေး ရခြေိုးပွီး ရခြေိုးခနျးက ထှကျတော့ ဆရာက ရခြေိုးခနျး တံခါးနား ရောကျနပွေီ။ ” ဟော … ဆရာ နိုးလာပွီပေါ့ ” ” အငျး … ရသေံ ကွားတာနဲ့ … ဆရာလညျး … နိုးလာတာပါ ” နှေး ရစေိုထမိနျကို ဆရာရှေ့ ဖွနျ့ဝတျပွီး ရငျပွနျလြားတော့ ထမိနျကကပျနပွေီး နိုအုံကွီးက ထငျးနပွေနျရော။ ခကျြခငျြးပဲ ဆရာ့ ပေါငျကွားက ဟာကွီး ဆကျကနဲ့ ခုံးထလာတယျ မကျြလုံးတှကေ ရစေိုပွီးပါးကပျနတေဲ့ နှေးထမိနျ အောကျက အဖုတျအရာကွီးဆီ ရောကျနတောပေါ့။နှေးလညျး ဆရာ့ ပေါငျကွား ကွညျ့မိတော့ အဖုတျထဲက ဆဈကနဲ့ ခံစားလိုကျရတာပါ။
” ဘာကွညျ့နတောလဲ … ဆရာရဲ့ … ချချ ချချ ” နှေး မကျြစောငျးလေး ပဈပွီး ရခြေိုးခနျး နံရံက ဘားတနျးပျေါ တငျထားတဲ့ တဘကျကို လှမျးယူတော့ ကိုယျလုံးပါ လှညျ့လိုကျရတယျ။ ကိုယျလုံးလှညျ့တာနဲ့ ဆရာ့ မကျြလုံးတှကေ နှေး ဖငျကွီးကို မလှတျတမျး လိုကျကွညျ့ နပွေနျရောပဲ။ ” လှလို့ကွညျ့မိတာပါ … နှေးရယျ … ကိုယျလုံးရော … ရုပျရညျရော … နှေးယောကငြ်္ား … ကိုစိုးမွငျ့ တော့ မိနျးမရတာ … အတျောကံကောငျးတယျ ” ” မွှောကျမနပေါနဲ့ … ဆရာရယျ … နှေး ဆရာ့ဖို့ … မုနျ့နဲ့ ကျောဖီ … အဆငျသငျ့ လုပျထားပါတယျ … ဧညျ့ခနျးထဲမယျ ” ” ဆရာ့ … မနကျစာက … ဒီမှာလေ နှေးရဲ့ ” ” အိုးးး … ဆရာ ကလညျး … ဟှနျ့ ” စကားပွောရငျး ဆရာက နှေးနား တိုးကပျပွီး ပေါငျကွားလေးထဲ လကျနဲ့ ထိုးပွနတော။ ” ကဲပါ … လနျးသှားအောငျ ရေ အရငျခြိုးလိုကျနျော … ဆရာ … နှေး အဝတျလဲလိုကျဦးမယျ ” ပွောပွီး ဆရာ့ဘေးက ကပျထှကျခဲ့ လိုကျတယျ။
အိပျခနျးထဲက ရခြေိုးခနျးမို့ အပွငျထှကျပွီးတာနဲ့ ရလေဲထမိနျ လဲပွီး ဆံပငျတှေ ခွောာကျအောငျ သုတျပဈနတော။ နှေး ဆံပငျတှေ သုတျတုနျး ရသေံတှေ ကွားနရေတယျ ဆရာလညျး ရခြေိုးနပေါပွီ။ နှေး ဆံပငျတှခွေောကျတော့ အဝတျဘီဒိုထဲက အကငြ်္ီနဲ့ စကပျ တှဲလကျြလေး ခေါငျးပျေါက စှပျခလြိုကျတယျ။ အဲခြိနျ ဆရာ နောကျက ရောကျလာပွီး စကပျအောကျနားစထဲ လကျသှငျးပှတျနတော။ စကပျလေးက ပေါငျလညျထိပဲ ဖုံးတော့ လကျသှငျး တာနဲ့ နှေး အဖုတျလေး တနျးထိတော့တာပေါ့။ ” အအေး ပတျနမေယျ … ဆရာရဲ့ … လှတျပါ … နှေး ရသေုတျပေးမယျ … လာ ” စကားပွောရငျး နှေးကိုယျလုံး လှညျ့လိုကျတော့ မကျြလုံးပွူးသှားရတယျ။ ဆရာက ၂ယောကျထဲရှိတယျ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ရခြေိုးခနျးက ကိုယျတုံးလုံးကွီး ထှကျလာတာ။ နှေး နဲနဲ ရှကျမိပမေယျ့ ဆရာ့ကို ကုတငျပျေါ ထိုငျခိုငျးရငျး တဘကျသုတျပေးနမေိတယျ။ ခေါငျးကနေ စပွီး မကျြနှာ ကြော ရငျဘတျ ဗိုကျသားတှေ သုတျပေးနတေုနျး ဆရာ့ပေါငျကွားထဲ လီးက ထောငျမတျလာတာ။
လီးဆီ တဘကျလေး အုပျတုနျး နှေးပုခုံးကို ဆှဲပွီး ကုတငျပျေါ လှဲခပြဈတယျ။ နှေး ပါးပွငျ ဖောငျးဖောငျးလေးကို လညျတိုငျလေးကို ဆှဲစုပျနတေော့ ဆရာ့ ဘယျဘကျပုခုံးပျေါမှေးတငျပွီး နှေးနို့အုံတှနေဲ့ ရငျဘတျခငျြး ပွားနအေောငျ ကပျပေးမိတယျ။ ဆရာ့လကျတဖကျက ပေါငျလယျထိပဲ ဖုံးတဲ့ နှေးစကပျ အောငျနားစလေးထဲ ဝငျလာပွီး ဖငျသားစိုငျတှေ ဆုပျနယျရငျး ကြောပွငျကို ပှတျသပျပေးနပွေနျရော။ ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ ဒီလို နရေမှနျး နှေးမသိခဲ့တာ ခု ဆရာနဲ့ကမြှ အယုအယ အပှတျသပျတှကေ စိတျကို နိုးကွှစကွေောငျး သိခဲ့ရတယျ။ ” နှေးက … တအားလှတာပဲကှာ ” ပုခုံးပျေါမေးတငျထားတဲ့ နှေး မေးဖြားလေးကို နမျးရငျး မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ပွောနရေငျး နှုတျခမျးလေး ဟပွီး တစေု့ပျတော့ ရငျထဲ ငွိမျ့ကနဲ သိမျ့ကနဲပဲ။
နှုတျခမျးခငျြး စုပျမိတော့ နှေးလညျး အာကမြခံ ဆရာ့ လြှာဖြားလေး စုပျပွီး တုံ့ပွနျပေးနမေိတယျ။နှဈယောကျသား တငျးကွပျစှာ ဖကျရငျး ဝငျသကျထှကျသကျ တှေ မွနျလာခဲ့တာပေါ့။ အတှအေ့ာရုံမှာပဲ ရဈမူးနတေုနျး နှေး အဖုတျနဲ့ ဖိထားတဲ့ ဆရာ့လီးက အကျကှဲကွောငျးထဲ အမွှောငျးလိုကျ မာထငျလာတော့ တဈကိုယျလုံး ဖိနျးရှိနျးသှားရတယျ။ နှေး အစိလေးက ဆရာ့လီး အရညျပွား ကို ဖိထောကျရငျး ငေါကျကနဲ့ ငေါကျကနဲ့ ဖွဈပွီး အထဲက အရညျလေးတှပေါ စိမျ့ထှကျလာတာ။ ” နှေး … အကငြ်္ီခြှတျလိုကျနျော ” ဆရာ့ ကိုယျပျေါမှောကျထားရာကနေ ခါးဆနျ့ရငျး ပေါငျလယျက စကပျအောကျနားစလေး မပွီး ဖငျကွီးကွှ အပျေါပငျ့ခြှတျတော့ တှဲလကျြအကငြ်္ီလေးပါ ခြှတျပွီးသားပဲ။ ညက မူးနလေို့ စိတျရဲပမေယျ့ ခုလို မနကျခငျး ပွတငျးပေါကျက ဝငျလာတဲ့ အလငျးရောငျလေးအောကျ ဆရာနဲ့ ကိုယျတုံးလုံး နမေိတော့ ရှကျစိတျလေး ဝငျလာတာပေါ့။
ရုတျတရကျ လီးတဆုံး လိုးခံလိုကျရလို့ နှေး ခေါငျးလေးမော့တကျပွီး အားကနဲ့ အသံထှကျ အျောလိုကျမိတယျ။ တအိမျလုံး နှေးနဲ့ ဆရာ ၂ယောကျထဲမို့ နှေး ခံစားမှု့အတိုငျး ဖှငျ့ခပြဈတာပေါ့။ ဆရာကလညျး စသိကတညျးက တိတျတခိုး စှဲလမျးခဲ့တဲ့ နှေးဖငျကွီးကို နောကျက ကွညျ့လိုးခငျြတယျ ပူဆာလို့ ကုတငျပျေါမှာပဲ လေးဘကျကုနျးပေး လိုကျတာလေ။ ” ဗဈြ … အ … ဘှတျ ဖှပျ …… အမလေးးးး ” နှေးဖငျကွီး အစှမျးကုနျ ကော့ပေးထားတော့ ဆရာ့ ဆောငျ့ခကျြတှေ ပွငျးထနျနတေယျ။ လီးဝငျလာတိုငျး တောငျ့ခံပေးပွီး စောကျခေါငျးအတှငျးသားတှနေဲ့ လီးကို ပွနျညှဈပေးနလေိုကျတာ။
” ရှီးးးးးးးးးးးး … ကောငျးလိုကျတာ … နှေး ရယျ … အိမျထောငျသညျ ဆိုတာ မယုံနိုငျစရာပဲ … အငျ့ … ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” နှေးလညျး အံကွိတျခံနရေတာပါ။ တကယျလညျး နှေး အဖုတျလေးက ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုကွီးစိုးမွငျ့ လီးတခြောငျးပဲ ဝငျဘူးတာလေ ဆရာ့ လီးက ခပျတုတျတုတျမို့ စောကျခေါငျးထဲ စီးကပျြနတောပေါ့။ အဖုတျထဲ လီးအရညျပွား ပှတျတိုကျမှု့ကွောငျ့ အရညျကွညျတှေ စိမျ့ထှကျလာမှ လီးအဝငျ အထှကျ ကောငျးလာခဲ့တာ။ လီးအရသာ ခံစားမိတော့ နို့အုံနှဈဖကျ တငျးမာလာတယျ ဆရာက နှေး ခါးလေး ကိုငျပွီး ဆှဲလိုးနရောက နို့အုံနှဈဖကျ ပွောငျးကိုငျပွီး ပဈပဈ လိုးတော့တာပဲ။ ” ရှီးးးးးးးးး … ကောငျးတယျ သိပျကောငျးတာပဲ … ဆရာရယျ … နှေး ဒီလို မခံစားဖူးဘူး … အ အားးး … ရှိးးးးးးးးး … ဘှတျ ဘှတျ … ဗဈြ …… အ အားးးး ဖှပျ ဘှတျ … အမလေးးးး ကြှတျကြှတျ ” ဖကျြကနဲ့ ကုတငျခေါငျးရငျးက နှေးခငျပှနျး ကိုကွီးစိုးမွငျ့နဲ့ နှေးနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျ အမှတျတရ ဓတျပုံကွီး မွငျတော့ စိတျထဲ ဖျေါမပွနိုငျတဲ့ ဝဒေနာလေး ဝငျရောကျလာတယျ။
နှေးတို့ လငျမယားအိပျတဲ့ ကုတငျပျေါမှာ ဖငျကွီးထောငျပွီး သူစိမျးယောကငြ်္ားတဦးကို မကျမကျမောမော အလိုးခံနတေဲ့ နှေးကို ကိုကွီးစိုးမွငျ့ မွငျရငျ ဘယျလိုခံစားနမေလဲ ဆိုပွီး တှေးနမေိတာ။ အဲခြိနျ ဆရာက ဒူးညှောငျးလာလိျု့ ပုံစံ ပွောငျးလိုးဖို့ ပွောနပွေနျတယျ။ ” နှေး … နောကျတမြိုး ပွောငျးလိုးရအောငျ နျော ” ” ဟငျ့ … ခံလို့ ကောငျးနမှေ … ဆရာကလညျး ” ပွောလညျးပွော လီးကို ဆှဲထုတျတော့ နှေးလညျး ဖငျကွီး ဘေးလှဲခပြွီး အဖုတျထဲက ကြှတျထှကျလာသော လီးကွီးကို ကွညျ့နမေိတာ။ အဖုတျထဲက အကြိအခြှဲတှေ ကပျနတေဲ့ ဆရာ့လီးကွီးက ခါရမျးနတေယျ။ ခငျပှနျးဖွဈသူ မဖွညျ့ဆညျးနိုငျတဲ့ ကာမသုခတှေ ပေးစှမျးရငျး ကော့ပြံနအေောငျ လိုးနိုငျတဲ့ လီးကွီး ကွညျ့ရငျး အလိုးခံခငျြတဲ့စိတျက တဖှားဖှား ဖွဈနတေုနျးပဲ။
ငေးကွညျ့နတေုနျး ဆရာက ကုတငျအောကျ ဆငျးပွီး မတျတပျရပျလကျြ အနထေားနဲ့ နှေး ကို ပကျလကျ လှနျခိုငျးနတော။ နှေးဖငျကွီးကို ကုတငျစောငျး ဆှဲယူပွီး မေးတငျလိုကျရငျး ပေါငျနှဈဖကျ ဆှဲမွှောကျဖွဲပွီး ဖေါငျးကွှနတေဲ့ အဖုတျထဲ လီးထိပျတေ့ ဆောငျ့လိုးနတေယျ။ ” အားးးး …… အ … ဆရာရယျ …… ရှီးးးးးးး ” ဆီးခုံးခငျြး ကပျတဲ့အထိ ဆောငျ့လိုးတော့ လီးထိပျက နှေး သားအိမျဝ ဆောငျ့မိနတောပေါ့။ အခကျြ ၅၀ခနျ့ မနားတမျး ဆောငျ့လိုးပွီးမှ နှေး ပေါငျတနျဖှေးဖှေး တုတျတုတျတှကေို ပုခုံးပျေါ ထမျးတငျလိုကျတယျ။ ကုတငျစောငျး နှေးပေါငျကွားထဲက အဖုတျက မော့ပေးထားသလို ဖွဈသှားရတာ။ ဆရာက စိတျကွိုကျ အနထေားရောကျတော့ ဖေါငျးကွှနတေဲ့ အဖုတျကို ကုတငျအောကျ မတျတပျ ရပျလကျြ အနထေားနဲ့ မီးပှငျ့မတတျ လိုးတော့တာပဲ။ ထိထိမိမိ လိုးခကျြမြားအောကျ နှေးလညျး ခေါငျးလေး ရမျးခါပွီး တအားအား အျောဟဈနရေတယျ။
” အားးးး …… ကောငျးလိုကျတာ … ဆရာရယျ … ဆောငျ့ဆောငျ့ … ဟုတျတယျ … မညှာနဲ့ …… လိုးစမျး … အမလေးးးး အ အားးးး …… ရှီးးးးးးးးး အ အ ” နှေး စကားအဆုံး ဆရာလညျး အံကွိတျပွီး အားရှိသလောကျ မနားတမျး ပဈလိုးနတော။ ” ဘှတျ …… အ …… ဗဈြ …… အားးးး …… အမလေးးး … သပွေီ သပွေီ …… နှေး သတေော့မယျ …… ကောငျးလိုကျတာနျော …… နှေး သတေော့မယျ … ဆရာရဲ့ ” ကာမစိတျ ပွငျးပွငျးထနျထနျနဲ့ နို့အုံနှဈဖကျကို နှေးလကျနဲ့ ဆှဲညှဈအျောတော့ နှေး မကျြနှာလေး ကွညျ့ပွီး ဆရာက ပုခုံးပျေါထမျးထားတဲ့ ပေါငျနှဈဖကျ ဆှဲရငျး တရကွမျး လိုးနတေယျ။
” အ အားးးး … ဆရာရယျ … ဆောငျ့ပေးဦး … အမလေးးး …… ကြှတျကြှတျ … ကောငျးလိုကျတာ …… မရပျနဲ့နျော ဆောငျ့စမျးပါ … အငျးဟငျး အားးး အားးးးး ” နှေး အထဲက တဆဈဆဈနဲ့ ယားတကျလာလို့ အားမလိုအားမရညညျးရငျး ဆရာ ပဈဆောငျ့တိုငျး အောကျက ကော့ထိုးပေးနမေိတာပါပဲ။ကော့ပြံ ညညျးတှားရငျး ပယျပယျနယျနယျ အလိုးခံနေ ရတော့ အားရကနြေပျ မိတယျ။ ဆရာလညျး နှေးမကျြနှာ စိုကျကွညျ့ရငျး အားကုနျ ဆယျခကျြခနျ့ ဆောငျ့ပွီး တဈကိုယျလုံး ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျ နဲ့ အဖုတျထဲ လရညျတှေ ပနျးထညျ့နပွေီ။
နှေးလညျး ကိုယျပျေါကလြာတဲ့ ဆရာ့ ကြောပွငျကို ဖကျပွီး ဖငျကွီး ကော့ထိုးရငျး စောကျရညျ ပနျးထုတျပဈလိုကျတာပေါ့။ ခဏနားရငျး ဆရာ မနကျစာ စားပွီး နှေးတို အတူဖကျအိပျကွတယျ။ နလေ့ညျပိုငျး ဆရာ သူမွို့ကို ပွနျကာနီး နှေးပါးပွငျလေးကို မကျမကျမောမောနဲ့ အကွာကွီး နမျးပွီးမှ ပွနျသှားရှာတာ။ရကျမှလ လမှနှဈ ရာသီ အလီလီ ပွောငျးခဲ့ပမေယျ့ ဆရာနဲ့ နှေးတို့ အဖွဈပကျြတှကေ မနတေ့နကေ့လို ပါပဲရှငျ…ပွီး။
ဆေးရုံကြီး အပြင်ဘက် မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့် မိတော့ ကျေးငှက်သံလေးတွေနဲ့ အစိမ်းရောင် သစ်ပင်ကြီးများကြောင့် ဘဝ အမောတွေကို ခဏတာ မေ့ပျောက် သွား စေတာပဲလေ။ မနက် ၈နာရီ ကျော်ကျော် လေးပဲ ရှိသေးတာပါ။ ညက ဆိုင်ကယ် အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တဲ့ လူနှစ်ယောက် ရောက်လာတော့ ၂ယောက်လုံး နွေး ကိုယ်တိုင် ရရှိလာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ချုပ်ပေးရတယ်။ တယောက်က လက်မောင်း နှစ်ဖက် နဂါးပုံ တက်တူးတွေနဲ့ အသက်က ၂၀ကျော်လောက်ပဲ ရှိမှာ မျက်နှာ နုနုချောချော လေးကို နားကွင်းတွေရော မျက်ခုံးပေါ်ပါ အကွင်းလေးတွေ ဖေါက်ဆွဲထားတော့ ရုတ်တရက်ဆို အကြည့်ရ ဆိုး နေတာပေါ့။ အရိုးခေါင်းတွေပါတဲ့ တီးရှပ် အနက်ရယ် လည်ပင်းက စတီးဆွဲကြိုး ပြောင်ပြောင် လက်လက်ကြီးရယ် လက်ကောက်ဝတ်က အနက်ရောင် သရေပြားပေါ်မှာ ကြယ်ပုံစံ ဖန်စီပုံတွေ အိုးးးး မျက်လုံးထဲ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပဲ။
ပေါင်လယ်မှာ ၄လက်မ လောက် ဘာလိုခိုင်းမိတာလဲတော့ မသိဘူး ပေါင်လယ်မှာ ၄လက်မလောက် ပြဲသွားတာ ဒဏ်ရာ နက်တော့ သွေးတအား ထွက်နေတာပေါ့။ ထိုင်ခုံ အပုလေးပေါ် ထိုင်ခိုင်းရင်း ဒူးဖုံး ဘောင်းဘီ အပွလေးကို ပေါင်ရင်းထိ လှန်တင်ပြီး ချုပ်ပေးတော့ သူတော့ မသိဘူး နွေး တော့ ရင်တွေ ခုန်နေ ရသေးတယ်။ ချုပ်ပေးတဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်ရင်းနားက ပန်းနုရောင် ဒစ်ကြီးက ဘောင်းဘီ အဟလေးကနေ ထွက်နေတာ။ ” မမနွေး … မအိပ်သေးတာလား … နိုးနေတာလား ” ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကို နားနေခန်းထဲ ထိုင်တွေးနေတုန်း တံခါးခေါက်သံနဲ့အတူ မအိ ဝင်လာပါရော။
” အော် … မအိ လာလာ … အိပ်ပါတယ် … ခုပဲ နိုးတာ ” ” မုန့် ဝယ်ပေးရမလား … သမီး သွားဝယ်ပေးမယ် ” ” နေပါစေတော့ မအိရယ် … အိမ်ရောက်မှ စားတော့မယ် ” မအိဆိုတာ နစ်(စ်) မလေး တယောက်ပါ အသားညိုညို လုံးလုံး လေးနဲ့ မျက်နှာလေးက အမြဲပြုံးနေလို့ ဆေးရုံက ဆရာဝန်းတိုင်းက ချစ်ကြတယ်။ ” အံမယ် … မမနွေးက … ဦးစိုး ခရီး ထွက်နေတာဆို … ဒီမှာပဲ … နေလေ … ညကြမှ ပြန်ပေါ့ … ဘာလဲ ဒီမှာဆို လွမ်းနေတာ သိမှာဆိုးတာလား ” မအိက ပြုံးစိစိလေးနဲ့ နွေးကို စနေတာပါ။ နွေးထက် ၁၀နှစ်ကျော်လောက် ငယ်ပေမယ့် မမနွေးလို့ ခေါ်ပြီး ညီအမတွေလို ဆက်ဆံကြတယ်။
နွေးအသက်က ၃၄ထဲမှာ မအိ အသက်က ၂၀ကျော်လေးရယ် နွေးခင်ပွန်း ကိုကြီး စိုးမြင့် အသက်က ၄၇နှစ်ဆိုတော့ မအိက ဦးတပ်ခေါ်တာပါ။ ကိုကြီး အလုပ်နားရက်တွေ ဆေးရုံ လာကြိုရင်း မအိတို့နဲ့ ရင်းနှီးနေတာပေါ့။ ” မယ့်လေးတော် … ရှင်တို့ လင်ယူမှ အဲဒီ ခံစားချက် … သိမယ် … ခိခိ ” မအိ ပြောပြီးတာနဲ့ အခန်းထဲက ဘေစင်လေးနား လျှောက်သွားပြီး နွေးလည်း ညကOperation လုပ်ပေးထားလို့ လက်တွေကို ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ဆေးကျောသန့်စင်နေတာ။ နွေးအကျင့်က အိမ်ပြန်ကာနီး အမြဲတမ်း လက်ဆေးပစ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။လက်ဆေးနေတုန်း မအိက နောက်ကနေ ခါးဖက်ပြီး နွေးဖင်သားစိုင်တွေကို သူ့ပေါင်ဂွလေးနဲ့ ဖိပွတ်နေတာ။ ” ဟိတ် … အချိန်ပြည့်နော် … ခ်ခ် ” မအိက ဇွတ်ပဲ နွေးဖင်ကြီးကို အနီးကပ်မြင်ရင် အူယားတယ်ဆိုပြီး လူရှင်းပြီဆို အမြဲ ပွတ်သပ်နေတတ်တာ။ ဆေးဘီဒိုလေး နောက် နံရံလေး ကပ်လိုက်ရတယ် အပြင်က တယောက်ယောက် ဝင်လာရင် ရုတ်တရက်မမြင်အောင် ကပ်ပေးရတာပေါ့။
မအိက ကလေးတယောက်လို နွေး နို့အုံလေး ညှစ်လိုက် ဖင်တွေ ညှစ်လိုက်နဲ့ အားရအောင် ပွတ်သပ် ညှစ်ချေပြီးမှ လူချင်း ခွာလိုက်တော့တယ်။ ” မမနွေး … အခန်းသော့ သမီးပဲ သိမ်းထားလိုက်မယ်နော် ” ” အင်းပါ … နွေးလည်း ညကြ … စောစော ပြန်ထွက်ခဲ့မှာ ” နွေး ဆေးရုံကနေ အိမ်အပြန် စားနေကြ ခေါက်ဆွဲဆိုင်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ဝင်ဝယ်ခဲ့သေးတာ။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ နွေးခင်ပွန်း ကိုကြီးစိုးမြင့် ဆီ ဖုန်းဆက်သေးတယ်။ နောက်၃ရက်နေမှ ရောက်မယ်ပြောနေတာ။ ခင်ပွန်းနဲ့ ပြောပြီး ရေချိုးဖို့ နွေး အဝတ်တွေ ချွတ်ချပြီး ထမိန်ရင်လျား နေတုန်း ဖုန်းသံလေး မြည်လာတော့ ဖွင့်ကြည့် မိတာပေါ့။ ” ဟယ်လို … နွေး အဆင်ပြေရဲ့လား ” ” ဟယ် … ဆရာ … မတွေ့တာ ကြာပြီ ……ပြေပါတယ် ဆရာရယ် ” ” အေးအေး … ဆရာလည်း ဒီမြို့လေး ခဏပြန်လာတာ … ရောက်တာနဲ့ ညည်းသတိရလို့ … လှမ်းဆက်လိုက်တာ ”
” ဟုတ်ဆရာ … နွေးလည်း … ခုမှ ဆေးရုံက ပြန်ရောက်တာ … ရေချိုးမလို့ ” နွေး ရေချိုးမယ် ပြောတော့ ဆရာ ဦးနိုင်မော် စကားသံ ခဏ ငြိမ်ကြသွားတယ်။ ခုတိုက်နယ်ဆေးရုံ လေးက နွေးထက် အရင် တာဝန်ကျတဲ့ နွေးဆရာပေါ့။ဆရာ ဦးနိုင်မော် ပင်စင်ယူသွားလို့ နွေးက ယာယီ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင် နောက်ကျ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်အနေနဲ့ တာဝန်ကျလာတော့တာ။ ” ဆရာပြောတာ … ပြန်လည်း မပြောဘူး နွေး ” ” ရှင် … ဆရာ ” ” ညနေကြ … ဆရာ လာခေါ်မယ် … မတွေ့တာကြလို့ … စားရင်း သောက်ရင်း စကားပြောရအောင် ” ” ဟုတ် … ဆရာ … နွေး စောင့်နေပါ့မယ် ” နွေးလည်း ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ဝယ်လာတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားရင်း ဆရာဦးနိုင်မော် နဲ့ ဆေးရုံမှာ စပြီး ဆုံတဲ့အကြောင်းလေး စဉ်းစားနေမိတော့တယ်။
နွေးရောက်ကာစ ဆေးရုံအထူးကုဆောင်ရဲ့ ဝရန်တာလက်ရမ်းပေါ် မှီရပ်ရင်း တခြား ဆရာဝန်တွေ စောင့်နေမိတာ။ မိတ်ဆက်ပွဲ လုပ်ပေးမလို့ ပြောထားလိုလေ။ ” ဟိတ်ကလေးမ … နွေးနွေးလှိုင် ထင်တယ် ” နွေး လက်က နာရီလေး ငုံ့ကြည့်နေတုန်း ရုတ်တရက် အသံထွက်လာလို့ အသံလာတဲ့ဆီ ကြည့်လိုက်တော့ ကုတ်အင်္ကျီနက်ပြာလေးနဲ့ ဘက်ဘီဘောင်းဘီ နက်ပြာ ဝမ်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့ လူကြီးတယောက်။ ” ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ” ” လာလာ … အထဲ ဝင်ရအောင် … ဒီလို ဝရိယ ရှိရင်တော့ ဒီဆေးရုံတွက် … အားကိုးရမှာပါ ” ” ဟုတ်ဆရာ … နွေးက ခုမှ စရောက်တဲ့ … အသစ်ဆိုတော့ … ကြိုရောက်နေတာပါ ” မျက်နှာ ခန့်ခန့်ငြားငြား နဲ့ စကားပြောရင် တဖက်သားပေါ် လွမ်းမိုးမှု့ ရှိတဲ့သူလို့ နွေး ကောက်ချက် ချနေမိတယ်။ ဆရာဝန် တယောက်မှန်း သိပေမယ့် အဲ့ချိန် ဒီတိုက်နယ် ဆေးရုံရဲ့ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးဆိုတာ မသိသေးဘူး။ ရိုးရိုး ဆရာဝန်မှတ်ပြီး စကားပြောနေခဲ့တာ။
ထူခြားတာက ဆရာဦးနိုင်မော်နဲ့ နွေးတို့ ခဏလေးနဲ့ ရင်းနှီးသွားကြတယ်။ ဒါကလည်း ဆရာ ဦးနိုင်မော်ရဲ့ အရည်ချင်းတခုပါ တဖက်လူရဲ့ စိတ်ကို နားလည်ပြီး အလိုက်သင့် ပြန်ပြောပေးနိုင်တဲ့ ပါရမီရှင်ပေါ့။ တဖြည်းဖြည်း အခန်းလေးထဲ ဆရာဝန်တွေ ဆရာဝန်မတွေ လူစုံတော့မှ ဆရာဦးနိုင်မော်က သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ရင်း နွေးနဲ့ တခြား ဆရာဝန်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးတာ။ အဲကျမှ နွေးလည်း မျက်လုံးပြူးသွားရတာပေါ့။ ခွဲစိတ်တဲ့ ဘက်မှာ ဒီတိုက်နယ်လေးသာမက နွေးအရင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ နွေးတို့ မြို့လေးထိ ဆရာ့ ဂုဏ်သတင်းက မွှေးပျံ့နေတယ်။ နွေး ရောက်ပြီး ၆လ အကြာမှာပဲ ဆရာက ပင်စင် ယူသွားတာပါ။ ပင်စင်သာ ယူသွားတာ နွေးခင်ပွန်းနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းလောက်ကို နုပျိုနေတုန်း။ အဲဒီ ၆လ အတွင်း နွေး ရင်ခုန်ရတဲ့ အချိန်တွေ သတိရတိုင်း စိတ်ထဲ သိမ့်ကနဲ့ အေးကနဲ့ ခံစားမိတုန်းပဲ။ ဆေးရုံရောက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး အိသူဇာဆိုတဲ့ နစ်(စ်) လေးနဲ့ ရင်းနှီးမြန်ခဲ့တယ်။
ဆေးရုံတခုလုံးက ချစ်ကြပုံပါ ကလေးမလေးက အသက်ငယ်ပေမယ့် သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ခိုင်းတာမှန်သမျှ မငြီးမငြူ လုပ်ပေးတော့ အကုန်လုံးက ချစ်ခင်နေကြတာပေါ့။ အများခေါ်သလို မအိလို့ပဲ နွေးလည်း ခေါ်နေမိတယ်။ မအိက စကားပေါသလောက် နွေးမရောက်ခင်က ဒီဆေးရုံ အကြောင်းတွေ ပြောပြတာ ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ အကောင်းသားပဲ။ သရဲဆိုလား နာနာဘာဝ ဆိုလားပဲ နွေးက သိပ် မယုံပေမယ့် သူပြောပြနေပုံက တကယ့် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ။ နောက်ကျမှ ဆရာဦးနိုင်မော်နဲ့ ရင်နှီးသွားရတာ။ မှတ်မှတ်ရရ နွေး ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျပြီး ၂လ အကြာလောက်ပဲ။ အရေးပေါ် လူနာ တယောက် အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်ပြီး သတိလစ်ရောက်လာတော့ နွေးတို့ အသက်ကယ်ဖို့ ကြိုးစားတုန်း သတိတချက် လည်လာပြီး နွေးမျက်နှာ စိုက်ကြည့်ရင်း ဆုံးသွားရှာတယ်။
တီးရှပ်အင်္ကျီအဖြူလေးရော အောက်က ဘောင်းဘီတို အနက်လေးရော ပွန်းရာ ပဲ့ရာတွေနဲ့ စုပ်ပြတ်သတ်နေတာ။ ခေါင်းက ဦးခွံနဲနဲ လန်ပြီး သွေးထွက်နေတာ အများကြီးပဲ။ နွေးလည်း စိတ်မကောင်းပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ည ၂နာရီ Operation တခု ထပ်ဝင်ရမို့ နာရီကြည့်တော့ ၁၂မတ်တင်းရှိသေး အချိန်လိုသေးတာနဲ့ မအိနဲ့ စကားပြောရင်း အချိန်ဖြုံးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။အရေးပေါ်ခန်းက ထွက်ပြီး လာနေကြအတိုင်း မလျှောက်ပဲ မြောက်ဘက်ကွေ့ပြီး အရှေ့ဘက် လျှောက်လာတော့ ရုတ်တရက် နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာတဲ့ ဆေးနံ့ပြင်းပြင်းကြောင့် နွေး အသက်အောင့် ထားလိုက်ရတာပေါ့။ မအိတို့ နစ်(စ်) တွေ နားနေခန်းထဲ ရောက်ဖို့က ကုသဆောင် ၃ခုလောက် ဖြတ်လျှောက်ရဦးမှာ အနံ့ ထွက်လာတဲ့ဘက် အသာလေး ငှဲ့ကြည့်တော့ လန့်သွားရောပဲ။ ” ဝှီးးးး … ဖလပ် … ဖလပ် … ဖလပ် … ဂစ်ဂစ် ”
” ဟဲ့ … အမလေး ဘုရား ဘုရား ” ရုတ်တရက် အတောင်ခတ်သံနဲ့ ညဥ့်ငှက်တကောင်ရဲ့ အော်သံက ချက်ခြင်း ထွက်ပေါ်လာတော့ နွေး လန့်ပြီး အော်မိတာပေါ့။ ကုသဆောင်တခုရဲ့ ထောင့်ချိုး ရောက်တော့ အပြင် ဆေးဝယ်ထွက်တဲ့ လူနာစောင့် တယောက် တွေ့လို့ စိတ်အေးသွားမိတယ်။ အဲချိန် ဖျတ်ကနဲ့ မီးကလည်း ပျက် ဆေးနံ့စူးစူးကြီးက နွေးနောက် ကပ်ပါနေတုန်းပဲ။ မအိတို့ နစ်(စ်) တွေ နားနေခန်း မြင်နေရပြီ ကြားထဲ ကုသဆောင် တခုပဲ ကျန်တော့တာ။ ” ရှပ် ရှပ် … ရှပ် ရှပ် ရှပ် ” အနံ့ဆိုးက ပိုပြင်းလာပြီး ခြေသံတွေပါ ကြားလိုက်ရတော့ နွေး ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထလာနေပြီ။
” ရှပ် ရှပ် ရှပ် … ရှပ် ရှပ် ” ခြေသံတွေ အနားကပ်လာလို့ နောက်လှည့်အကြည့် အံအော မှင်သက်ပြီး နောက်ကို ခြေလမ်း သုံးလေး လှမ်း ဆုတ်မိလိုက်တာ။ ” အမလေး … ဆရာရယ် … အသံမပေးပဲနဲ့ရှင် … ဟူးးးးးးးး ” ဖြစ်ချင်တော့ နွေးနောက်ကို အဆုတ် ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ထမိန်အောက်နားစက နွေးဖိနပ်နဲ့ ချိတ်ဖိမိတော့ ထမိန်ကျွတ်ကျသွာတယ်။ လှမ်းဖမ်းတော့ နွေးပေါင်လယ်လောက်မှာ ထမိန်အနားစကို ဆွဲမိတာပဲ။ အမြန်ပြန်ဝတ်လိုက်ပေမယ့် ဆရာဦးနိုင်မော်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက နွေးပေါင်ဂွထဲ ရောက်နေတာပေါ့။
ဆရာ ဦးနိုင်မော်လည်း Operation တခုပြီးလို့ ပြန်နားတာနေမယ်။ ” ခိခိ … ဆရာ ထွက်လာတော့ ညည်းက … ညည်းအခန်းပြန်တာ … ပြန်နေကြ အတိုင်း မပြန်ပဲ … အနောက်ထဲ ချိုးကွေ့ပြန်လို့ … ဆရာ လိုက်ကြည့်နေတာပါ ” ” နွေးက … ည ၂နာရီ Operation တခု ထပ်ဝင်ရမှာမို့ … မအိ ဝင်ခေါ်ပြီး စကားပြောရင်း … အချိန် ဖြုံးမလို့ပါ … ဆရာရယ် … အဟင်း ဟင်း ” နွေးလည်း ဆရာရှေ့ ရှက်ရှက်နဲ့ ထမိန် ဖြစ်သလို ဝတ်ရင်း ခေါင်းငုံ့ နေမိတာပေါ့။ ဖြည်းဖြည်းချင်း မျက်လုံး လှန်ကြည့်တော့ အံအောနေမိပြန်ရော။အဲချိန် ဆရာ ဦးနိုင်မော်က နွေး နောက်ကျောဘက် တောင်ဘက်ဒေါင့်က လူနာထိုင်ခုံအရှည်တွေ ဆင့်ထားတဲ့ ဘက် အကြည့်ရွေ့ပြီး စကားလှမ်းပြောနေတာ။ ” ဘယ်သူလဲ … အောက်ဆင်းစမ်း … ဟာ … မင်း မင်း … လူနာ တယောက် မဟုတ်လား ” ဆရာက အော်ပြောနေပေမယ့် အဲဒီလူနာက မကြားလို့နေမှာ ပြန်ဖြေသံ မကြားရဘူး။
နွေးလည်း နောက်လှည့်ပြီး ဆရာကြည့်တဲ့ နေရာ ကြည့်တော့ ခုံတွေပဲ မြင်ရတာမို့ ဆရာ့ မျက်နာကို သေချာ ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ဆရာက နွေးကို မေးဆတ်ပြရင်း ခုံတွေဘက် ပြန်ကြည့်နေတော့ နွေးလည်း ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ” ဆရာ … ဘယ်လူနာ ကိုပြောနေတာလည်း ” ” ဟာ … ဟိုမယ်လေ … အင်္ကျီအဖြူ ဘောင်းဘီ တို အနက်လေးနဲ့ … ခေါင်းမှာလည်း သွေးတွေ အများကြီး ” ဆရာ့ စကားကြောင့် နွေး တကိုယ်လုံး ဖြန်းကနဲ့ ကြက်သီးမွှေးတွေ ထပြီး လန့်သွားမိတယ်။ ” ဟမ် … နွေးနွေးလှိုင် … ညည်းက ဘာဖြစ်နေတာတုန်း … ညည်းပြောနေတာနဲ့ … ခုံပေါ်က လူနာ ဆင်းပြေးပြီ နေမှာ ပျောက်သွားပြီ ” ဆရာက ခုံတွေဘက် ကြည့်ပြောလိုက် နွေးဘက် ကြည့်ပြောလိုက်ပဲ။
” ဟို ဟို …… ဘာ ဘာမှ … မ ဖြစ် ပါ ဘူး ဆရာ ” နွေးအသံ တွေ သိသိသာသာကို တုန်နေတော့တယ်။ ခုနမှ နွေးကို စိုက်ကြည့်ရင်း အသက်ထွက်သွားတဲ့ ကောင်းလေးရဲ့ အဝတ်စားတွေ တူနေပြီး ခေါင်းကလည်း သွေးထွက်နေတယ် ဆိုလို့လေ။ အဲဒီညက ဆရာ ဦးနိုင်မော်နဲ့ပဲ ည၂နာရီ မထိုးခင် အထိ အချိန်ဖြုံးမိသွားတယ်။ နွေးကြောက်စိတ်တွေ နဲ့ ဆရာရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကာမစိတ်တွေ မမျှော်လင့်ပဲ ဆုံမိကြတော့တာပဲ။ နွေး လက်ပေါ် ဆုံးသွားတဲ့ လူနာရဲ့ သွေးသံရဲရဲ မျက်နှာလေး ပြန်မြင်ယောင်ပြီး စိတ်ထဲ လန့်သလိုလို ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ နွေး ပါးပြင်လေးပေါ် အနမ်းတခု ကျရောက်လာတယ်။
အပြင်မှာ ဆေးရုံဝင်းတခုလုံး မီးလင်းထိန် နေပေမယ့် နွေးအခန်းထဲ မီးချောင်းပိတ်ပြီး မီးလုံးလေးပဲ ထွန်းထားလိုက်တာ။ ပြတင်းပေါက် အပြင်က သစ်ပင်တွေ လေတိုက်တိုင်း ယိမ်းနေသလို နွေးကိုယ်လုံးလေးလဲ တွန့်လိမ်နေရပြီလေ။ ဆရာဦးနိုင်မော်က အသက်၆၀ ပြည့်ပေမယ့် အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ပဲ ကာမစွမ်းအား ရှိနေတုန်းပဲ။ နွေး အိမ်ထောင်သည်မှန်းလည်း သူသိပါတယ်။ သူလည်း အိမ်ထောင်သည် တယောက်ပါ ဆရာ ဦးနိုင်မော် အိမ်ကို နွေးခင်ပွန်းနဲ့ ၂ခါလောက် သွားလည်ဖူးတယ်။ လူချင်း ရင်းနှီးလာတော့လည်း တယောက် အကြောင်း တယောက် ရင်ဖွင့်ကြတာပဲလေ။ နွေးကလည်း အသက်အရွယ်အရ မိဘ သဖွယ် ဆက်ဆံခဲ့တာပါ။ ဆရာက မိန်းမဆုံးတာ ၆နှစ်ရှိပြီး သား၂ယောက်နဲ့ အတူနေတာ။
သူ့သားတွေက နွေးနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ။ နွေးကို ဆေးပညာရပ်တွေနဲ့ လက်တွေ့ ကုထုံးတွေ အခွင့်ရေး ရသလောက် သေချာ သင်ပေးနေရင်း တဖြည်းဖြည်းဆရာ့ဘက်က ဆက်ဆံရေးက တမျိုးဖြစ်လာတာ နွေးရိပ်မိတာပေါ့။ တခြား ဆရာဝန်တွေရှေ့ ဆရာ တပြည့် ပုံစံမျိုး ဆက်ဆံတတ်ပြီး နှစ်ယောက်ထဲ ရှိချိန်ဆို နွေးနဲ့ ပွတ်သီး ပွတ်သပ် နေချင်တာမျိုး။ နွေး ခင်ပွန်းက ဒီမြို့လေး ပြောင်းလာကတည်းက ခရီးထွက်တာ များနေတော့ နွေးလည်း ဆရာရဲ့ အထိအတွေ့ လေးတွေမှာ သာယာမိတာ ဝန်ခံပါတယ်။ သားအဖ အရွယ်နဲ့ ဆရာ တပြည့် အနေထားမို့ ဆေးရုံထဲရော ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ မရိပ်မိကြတာ။ ခုလည်း ဆေးရုံက နွေးအခန်းလေးထဲ ခွဲစိတ်ခန်း မဝင်ခင်လေး မတ်တပ်ရပ် လျက်အနေထားနဲ့ နွေးက ဘီဒိုကွယ်ပြီး နံရံ ကပ်ပေးထားတယ်။ နွေးပေါင်ကြားထဲ ဆရာက ဒူးထောက်လျက် အနေထားနဲ့ မျက်နှာအပ်ပြီး အတွင်းခံ အပြင်ဘက်ကနေ နွေးဟာလေးကို ယက်ပေးနေတာ။ နွေး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေး ပေါင်ဂွထဲနစ်ဝင် နေတာပေါ့။
ဆရာ့ လျှာအပြားလိုက်ကြီးနဲ့ ဖိယက်ပေးနေတော့ တံတွေးရော အရည်ကြည်လေးတွေရော ဘောင်ဘီးစကို ကပ်ပြီး နွေဟာလေး သိသိသာကို ဖေါင်းကြွလာပြီ။ နွေး အသက်ပြင်းပြင်းရှုပြီး မျက်လုံးလေး မိတ်ထားလိုက်တယ်။ အယက်ခံနေရတာက သွေးသားထဲ တဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ ခံစားမှု့က ဘာနဲ့မှ မတူအောင် အရသာတွေ့နေမိတာ။ပေါင်ကို မသိမသာ ဖြဲပေးရင်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာလို့ ပေါင်ကြားထဲ ဆရာ့ ခေါင်းကို ဆွဲပြီး ကပ်ထားမိတယ်။ တကယ်ပါ နွေး ခင်ပွန်းနဲ့ ဆက်ဆံတာထက်ကို ခံစားမှု့က တအားကောင်းနေတာလေ။ နွေး ခင်ပွန်း ကိုကြီးစိုးမြင့်နဲ့က ဆက်ဆံကာနီး ခဏတဖြုတ် ပါးစပ်ခြင်းနမ်းပြီး ထမိန်ကို ဆီးခုံးထိပဲ လှန်ပေးရင်း ဆက်ဆံလာတာ။ နွေး အိမ်ထောင် သက်တမ်း တလျှောက် ဒီလို အရသာမျိုး တခါမှ မရခဲ့ဖူးဘူး။ နွေးကိုယ်တိုင် ချထားတဲ့ စည်းမို့ ခုချိန် ပြင်ဖို့ကလည်း အခက်တွေ့နေမိပြီ။ ဆရာ့ကို အတွင်းခံ အပြင်ကနေပဲ ယက်ခွင့်ပြုထားတာပါ ဆရာကလည်း နွေးဆန္ဒ အတိုင်း လိုက်နာပြီး ဘောင်းဘီအပြင်ကပဲ ယက်နေရှာတာ။ တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ အရသာလေးကို နွေး ဖင်ကြီးကို ကော့ပေးရုံပဲ တတ်နိုင်တော့တယ်။
အကနဲ့ အံကြိတ် ညည်းရင်း ဘောင်းဘီလေးထဲ နွေးကနဲ့ ခံစားလိုက်ရပြီ ပေါင်ခြံထဲ ဘောင်းဘီကြားက စီးကျနေတဲ့ အရည်တွေက စေးကပ်ကပ်နဲ့ ခံစား သိရှိနေတာပေါ့။ နွေး ပြီးသွားတာနဲ့ ထမိန် အောက်နားစကို မထားပေးရတာ။ နွေးပေါင်ဂွ အတွင်းခံထဲက အရည်ရွှဲပြီး ဖေါင်းကြွနေတဲ့ နေရာလေး ကြည့်ရင်း ဆရာက သူ့ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင့်ပြီး ဂွင်းထုနေတော့ နွေး မျက်နှာလေး လွဲထားမိတယ်။ ၃မိနစ်လောက်ကြာမှ ဆရာ ဆီက တအအ တရှီးရှီး ညည်းသံလေး ထွက်လာပြီး ဆရာလည်း အထွဋ်ထိပ် ရောက်သွားတာပေါ့။ ဆရာ ပင်စင် ယူသွားတဲ့ အထိ နွေးနဲ့ ဆရာတို့ ၅ကြိမ်လောက် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အဆုံးထိ မရောက်ခဲ့ကြပါဘူး ဆရာ့ ဟာကိုတောင် နွေး ရဲရဲ မကြည့်ဖူးဘူး နွေးဟာလည်း ဘောင်းဘီ အပြင်ကနေပဲ ဆရာ ကြည့်ခွင့်ရတာပါ။
ဆရာ ပင်စင်ယူသွားပြီး ၅လ အကြာမှ ဒီမြို့လေး ပြန်ရောက်လာရင်း ညနေ တွေ့ဖို့ ချိန်းတော့ နွေး ရင်ခုန်နေမိတာပေါ့။ စားလက်စ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို လက်စသတ်ပြီး အခန်းထဲ မှေးနေလိုက်တာ။ အိပ်လို့ မရတော့ပါဘူး အတိတ်က ပုံရိပ်တွေ မြင်ယောင်လာတာနဲ့ နွေး အောက်ပိုင်းက တဆစ်ဆစ်နဲ့ပါပဲ။ ညနေ မြန်မြန် ရောက်ချင်မိတာတော့ နွေး ဝန်ခံပါတယ်ရှင်။ အိပ်ယာထဲ လူးလိမ့်ရင်း ဘယ်ချိန် အိပ်ပျော် သွားလည်း မသိဘူး ညနေ ၄နာရီလောက် နိုးလာခဲ့တာ။ ချက်ချင်းထပြီး ရေချိုး အဝတ်စားလဲ လိုက်တယ်။ ပြောရမယ်ဆို နွေးခင်ပွန်းနဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် စတွေ့တဲ့ ခံစားမှု့မျိုးပဲ။ လူကြီးချင်း သဘောတူပြီး နွေးနဲ့ နွေးခင်ပွန်း စတွေ့တဲချိန် အဝတ်စားရွေးရင်း ခေါင်းတွေ မူးလာသလိုမျိုး ခ်ခ် ခ်ခ်။
ခုလည်း နွေးတို့ လင်မယား အိပ်ခန်းထဲ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ရှေ့ ဘော်လီ အနက်လေးနဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အနက်လေးပဲ ဝတ်ထားပြီး အင်္ကျီကို တထည်ချင်း နွေးခန္ဓာကိုယ်မှာ ကပ်ကြည့်နေတာ။ အင်္ကျီကြိုက်တော့လည်း ထမိန်က အဆင်မပြေ ကုတင်ပေါ် ပစ်တင်လိုက် ဘီဒို ဖွင့်ပြီး နောက်တထည် ယူကြည့်လိုက်ပဲ။ နွေး နို့အုံ ဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်က တချို အိမ်ထောင်သည်တွေလို တွဲကျမနေဘူး ဘော်လီ ခပ်တင်းတင်းလေးထဲ နို့အုံ အပေါ်ခြမ်းလေးက ရုန်းထွက်နေတာ။ ပေါက်တန်နှစ်ဖက်ကြားက နွေးအတွင်းခံလေးကလည်း အပျော့သားအပါးလေးမို့ အမွှေးရေးရေးလေးတွေ သေချာကြည့်ရင် မြင်နေရတယ်။
နောက်ဆုံးကျ ဖက်ဖူးစိမ်း ကိုယ်ကျပ် လက်ပြတ်လေးနဲ့ ထမိန်စကပ် အညိုရောင် ဗျောင်လေးပဲ ရွေးလိုက်တော့တာ။ ညနေကြ ဆရာ လာခေါ်တော့ ဆရာ့ကားလေးနဲ့ပဲ လိုက်လာခဲ့တယ်။ စကားတပြောပြောနဲ့ မီးပွိုင် ၂ခု ကျော်တော့ အရှေ့ တည့်တည့် ချိုးမောင်းနေရင်း နွေး ကြိုက်တဲ့ဆိုင် ပြောဆိုပြီး မေးတော့ နွေးလည်း ဆရာ ကြိုက်တဲ့ဆိုင် သွားလို့ပဲ ပြောလိုက်တာပါ။ ၁၀မိနစ်လောက် မောင်းလာရင်း အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် ကားလေး မေးတင်လိုက်တယ်။ ကားရှင်းအောင် စောင့်ပြီးမှ တောင်ဘက်ထဲ ကွေ့ပြီး ဆက်မောင်းလာတော့ လမ်းအရှေ့ဘက် ဝင်ကာစ နေလုံးကြီးနဲ့ လယ်ကွင်းတွေ မြင်နေရပြီး လမ်းအနောက်ဘက်က လူနေအိမ်တွေပါ။ အလင်းရောင် မပျောက်သေးပေမယ့် တချို့ ဘီယာဆိုင်တွေ အအေးဆိုင်တွေက ရောင်စုံမီးလေးတွေ ထွန်းထားကြတယ်။ စကားတပြောပြောနဲ့ မောင်းလာရင်း ခြံဝင်း အကျယ်ကြီးနဲ့ ဆိုင်ရှေ့ လှည်းဘီးကြီး ၂ခု ထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်ရှေ့ ရောက်လာပါပြီ။
အတွင်းထဲ ရောက်တော့ ကားတွေ အများကြီး တန်းစီရပ်ထားပြီး ဂိတ်စောင့် ကောင်လေး တယောက် နွေးတို့ ကားနားလေး ရောက်လာတယ်။ ကားထားဖို့ နေရာ ရှင်းပြပြီး လက်ညိုး ညွန်ပြနေတာ။ ခြံဝင်းကြီးထဲ မြက်ခင်း အတုလေးတွေနဲ့ စိတ်ကြည်နုးစရာ ပန်းခြံ အသေးလေး လုပ်ထားသေးတယ်။ ကားထားပြီး ဆိုင်တံခါး ဖွင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ နွေး အံအော သွားမိတာပဲ။ အရင် နွေး ခင်ပွန်းနဲ့ ကလပ်တွေ သွားဖူး ပေမယ့် ဒီလောက် ခန်းနား ကြီးကျယ်တဲ့ ဆိုင်မျိုး မရောက်ဖူးဘူး။ အထဲရောက်တာနဲ့ ဧည့်ကြို မိန်းမချောလေးတွေက နွေးတို့ကို ပြုံးပြ နူတ်ဆက်ရင်း ဘဲဥပုံ စားပွဲ အဝိုင်း အလွတ် တခုံမှာ နေရာ ချပေးနေတာ။ ခုံပေါ်မှာ ဖန်ခွက် အရှည် ၅လုံးနဲ့ တစ်ရှူးဗူး ၁ဗူး ပြီးတော့ ရှိနိုင်တဲ့ အစားအစာနဲ့ အရက်အမျိုးစားတွေ ဝိုင်အမျိုးစားတွေ ပါတဲ့ စာအုပ်လေး ချပေးထားတယ်။
ထူးခြားတာက နောက်ဆုံး စာရွတ်မှ သော့ပုံလေးနဲ့ သီးသန့်ခန်း အသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် ထည့်ပေးထားတာ။ ဆရာက တရွတ်ချင်း လှန်ဖတ်ပြီး အနားရပ်နေတဲ့ ဝိတ်တာလေးကို အရက်နဲ့ ဝိုင်တချို့ မှာလိုက်တယ်။ ဝိတ်တာလေး စာရင်း မှတ်နေတုန်း သီးသန့်ခန်း မေးကြည့်တော့ ဒေါင့်ဆုံး တခန်းပဲ ကျန်တာ ရှင်းပြနေတာ။ ရတဲ့ အခန်းယူမယ် ပြောတော့ ဧည့်ကြို မိန်းကလေး ၂ယောက် ရောက်လာပြီး နွေးနဲ့ ဆရာ့ကို သီးသန့်ခန်းထဲ လိုက်ပို့ကြတာပေါ့။ အဲဒီအခန်းရောက်မှ စားစရာတွေ ထပ်မှာရင်း ဧည့်ကြိုးလေးတွေက မှာစရာရှိရင် စားပွဲခုံပေါ်က ခလုပ်လေး နှိပ်ခေါ်ဖို့နဲ့ ဆက်ရှင် ပြည့်လို့ ထပ်ယူချင်ရင် နှိပ်ရမယ့် ခလုပ်လေး ခွဲခြား ရှင်းပြပေးသေးတယ်။ မှာထားတဲ့ အရက်နဲ့ ဝိုင်တွေ စားစရာတွေ ရောက်လာတော့ အခန်းတံခါးက အလိုလို ပြန်ပိတ်သွားပြီး စားရင်း သောက်ရင်း အရင်က အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောတော့ နွေးလည်း စိတ်ပျော်ရွှင် လာတာပေါ့။
အစုံပါပဲ နွေးတို့ သရဲ ချောက်ခံရတာတွေရော ဆရာ့ နူတ်ဆက်ပွဲည သီချင်းဆိုရင်း မူးပြီး ကကြတာတွေရောပဲ။ တဖြည်းဖြည်း နွေးလည်း ရီဝေဝေ ဖြစ်လာရတယ် အိမ်ထောင်ရေးကြောင်း ပြောဖြစ်တော့ ဆရာက နောက်အိမ်ထောင် မပြုပဲ သားတွေ ချွေးမတွေနဲ့ပဲ အတူနေကြောင်း ပြန်ပြောပြနေတာ။ နွေး လည်း ခင်ပွန်းနဲ့ ခဏတိုင်း ခွဲနေရပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေကြောင်း ပြန်ပြောပြလိုက် ပါတယ်။ ခုလည်း နွေးခင်ပွန်း ခရီးထွက်သွားကြောင်း ပြောတော့ ဆရာ မျက်လုံးတွေ အရောင် တာက်လာတာ။ဘေးတိုက် ထိုင်နေရင်း နွေးရှေ့ မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားနဲ့ ငုံ့ပြီး နွေးနူတ်ခမ်း ကို ဆွဲစုပ်နေတယ်။ ရုတ်တရက် နွေးလည်း ကြောင်သွားတာပေါ့။ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ရင်း ဆရာ့ လက်တဖက်က နွေး အင်္ကျီပေါ်ကနေ နို့အုံကို ညှစ်နေပြန်ရော။ နို့အုံညှစ်ချေရင်း နွေးလျှာကို မလွတ်တမ်း စုပ်နေတော့ အသက်ရှုကြပ်ပြီး မောလာရတယ်။
နွေး နူတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်တာနဲ့ နွေး ချိုင်းနှစ်ဖက်ကနေ ဆွဲမပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားနဲ့ ခပ်တင်းတင်း ဖက်ပြီး လည်တိုင်တွေ ဆွဲစုပ်ပြန်ရောပဲ။ ” နွေး … ဆရာကို … အရင် အခွင့်အရေးလေး ပေးဦးနော် … အမှန်တော့ နွေးနဲ့ တွေချင်လို့ … ဆရာ ဒီကို ရောက်လာတာပါ ” ဆရာ့ စကားက နွေးရင်ကို သိမ့်ကနဲ့ ခံစားမိစေပါတယ်။ လည်တိုင်ပျောလေး ဆွဲစုပ်နေရာကနေ နွေးရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ချရင်း စကပ်ထမိန် အောက်နားစလေးကို ဆွဲမနေတာ။ ထမိန်က အတွင်းဘက် ဒူးအထက်နားထိ ခွဲထားတာမို့ အနားစကို ပြန်ချရင်း အကွဲနေရာကနေ ဆွဲဖြဲတော့ နွေးပေါင်တန် ဖွေးဖွေးလေး ပေါ်လာတာပေါ့။ အရင်လိုပါပဲ ပေါင်အတွင်းသားလေးတွေ နမ်းပြီး နွေးဟာလေးကို အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အပြင်ကပဲ ယက်ပေးနေတယ်။ နွေးစိတ်တွေ ဆေးရုံပေါ်က အခန်းထဲ ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ မကြာပါဘူး နွေး အရည်တွေ ထွက်ကျလာတာ။
ဒီတခါ ပေါင်ခြံထဲ စီးကျလာတဲ့ အရည်တွေ လျှာနဲ့ပင့်ယက်ပြီးမှ ထရပ်လိုက်တယ်။ နွေးလည်း ဆရာ ဘာဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတာ သိနေတော့ ပေါင်လယ်ထိ ခွဲထားတဲ့ စကပ်ထမိန်ကို မပြီးဖြဲလိုက်ရင်း နွေးပေါင်ဂွကို ဆရာ မြင်အောင် ပြထားလိုက်တာ။ နွေးနူတ်ခမ်း လာနမ်းလို့ ပြန်နမ်းပေးတော့ ဆရာ့ပါးစပ်က နွေး စောက်ရည် အနံ့လေး ပြန်ရနေတယ်။ နမ်းနေရင်း ဆရာ့ ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင့်တော့ အတွင်းခံထဲ ဖောင်းကြွနေတဲ့ အရာကြီး မြင်တာနဲ့ နွေး မျက်နှာလွဲပစ်လိုက်တာပေါ့။ ခဏလေးပဲ ဆရာလည်း စိတ်တအား ကြွနေပုံပါ အားကနဲ့ အံကြိတ်သံ ပေါ်လာလို့ နွေး နောက်ဆုတ်လိုက်ပေမယ့် ထမိန်ပေါ် ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်တွေ ပန်းခံလိုက်ရတယ်။နွေး ကျောပေးပြီး ခုံပေါ်က တစ်ရှုးတလွှာဆွဲယူပြီး ထမိန်ပေါ်က အရည်တွေ သုတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။
” ဆောရီး … နွေးရယ် … ဆရာ သတိလွတ်သွားတာပါ … ဟိုး အရင်လို … ဘေးကို ပန်းထုတ်ရမှာ … မေ့သွားတယ် ” ” အင်းပါ … ဆရာရဲ့ … ရပါတယ် ” ဆရာလည်း ဘောင်းဘီ ဇစ်ပြန်ပိတ် နွေးလည်း အင်္ကျီကို ပြန်ဆန့်ရင်း စကပ်ထမိန်ကို ဆွဲဆန့်လိုက်တာ။ ခုံပေါ် ပြန်ထိုင်ပြီး လက်ကျန် အရက်နဲ့ ဝိုင်တွေ ဆက်သောက်ကျတာပေါ့်။ နွေး အတွက် ဝိုင်က ကုန်သွားပေမယ့် ဆရာ့ အရက်တွေက ကျန်နေသေးတာ။ ဆရာ့ကြည့်တော့လည်း မူးနေတဲ့ ပုံမို့ အပြန်ကားမောင်းရင် အန္တရယ် မဖြစ်အောင် ဆက်မသောက်ဖို့ တားထား လိုက်တယ်။ ရမ္မက်စိတ်က မကျသေးပဲ ပြန်ထလာတော့ ဆရာ့ လက်က နွေးပေါင်ကြားတဲ့ ပြန်ရောက်လာရောပဲ။
ဒီတခါတော့ နွေးကစပြီး နူတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ နူတ်ခမ်းချင်း စုပ်ရင်း ပေါင်နှစ်ဖက် ဖြဲပေးလိုက်တာနဲ့ နွေးဟာလေးက အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ကျလာတယ်။ ဘောင်းဘီ အပြင်ကနေပဲ ဆရာ့ ညာလက်က လက်ချောင်းတွေ အထက်အောက် ပွတ်သပ် ပေးနေတုန်း လွတ်နေတဲ့ ဘယ်လက်က နွေး လက်တဖက်ကို ယူပြီး သူ့ပေါင်ကြားထဲ ဆွဲ သွင်းလိုက်တာ။ နွေး လက်ဖဝါးထဲလည်း ဆရာ့ ဟာက အရည်ထွက်ပြီး တာတောင် မပျော့ပဲ မာထင်နေတုန်းပဲ။ဆရာ့ လက်ချောင်းလေး တချောင်းက နွေး ဟာလေးထဲ ဖိထည့်တော့ ဆစ်ကနဲ့ အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်လာပြီ။ လက်ကလေးက မွှေနေပေမယ့် ဘောင်းဘီ ခံနေတော့ အတွင်းထဲ လက်တဆစ်ပဲ ရောက်တယ်။ တဗွိဗွိကနဲ့ အသံလေး ထွက်လာရင်း နွေး အစိလေး မာထင်ပြီး ထောင်နေတော့တာပဲ။ဆရာ့ လက်ချောင်းလေး အပေါ်နဲနဲရွှေ့လာရင်း ဝိုင်းပြီး ဖိချေပေးတော့ နွေး နေရထိုင်ရ ခက်လာတာပေါ့။
ခါးအောက်ပိုင်း ကျင်တက်လာတယ်။ လက်ချောင်း ထိပ်လေးက ဖိချေရင်း အားပြင်းလာလိုက် ပျော့သွားလိုက်နဲ့ အဆက်မပြတ် လုပ်ပေးနေတော့ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး တခုခုကို တောင်းတ လာသလိုပါပဲရှင်။ ” တီတီ တီတီ …… တီတီ တီတီ ” အဲဒီချိန် ဆက်ရှင် ပြည့်သွားလို့ မီးနီလေး လင်းပြီး တတီတီနဲ့ အသံလေး မြည်လာတော့တယ်။ နွေး စိတ်ထဲ အားမလို အားမရ ဖြစ်နေရင်း ဆရာ့ ဟာကြီးကို ဘောင်းဘီ အပြင်က နေပဲ ခပ်တင်းတင်း တချက် ညှစ်ပြီး လွတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့။ ဆရာက ထပ်နေမလား မေးပေမယ့် ဆေးရုံ ဂျူတီ ရှိနေလို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်တာပါ။ နွေး အိမ်ရောက်တဲ့ အထိ ကလပ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အထိအတွေ့တွေက ကပ်ပါလာတုန်းပဲ။ မီးလုံးတွေ ပြန်ပွင့်လာလို့ နွေးနဲ့ ဆရာနဲ့ ဆက်မကြိုးစားတော့ပဲ ရပ်ပြစ်ခဲ့ရတာလေ။
ဆရာ အိမ်ပြန်ပို့ပေးတော့ နွေး သောက်ခဲ့တဲ့ ဝိုင်က အစွမ်းပြတော့တာပေါ့။ကားထဲက ဆင်းကတည်းက ဆရာ့လက်မောင်းကို ဆွဲထားလိုက်ရတာ။ ခေါင်းတွေ တရိပ်ရိပ် ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်နဲ့ မူးလာပြီး ဆရာ့ကို အိမ်သော့ပေး ဖွင့်ခိုင်းရင်း ၂ယောက်သား ဝင်လာခဲ့ရတော့တယ်။ အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်ပြီး အမှောင်ထု ကြီးဆိုးချိန်မို့ အိမ်ထဲ မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ့ပါ။ နွေးကတော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မျက်စိမိတ်ပြီး လျှောက်လို့ရပေမယ့် ဆရာ့ကတော့ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ပါ နွေးတို့ လင်မယားခန်းထဲ ဆရာ့ကို ပါးစပ်က ညွှန်ပြပေးလိုက်ရတယ်။ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ဆရာ့ကိုပဲ မီးခလုပ် ဖွင့်ခိုင်းရင်း သတိအလွတ်မခံပဲ ဆေးရုံကို ဒီနေ့ ဂျူတီ မလာနိုင်ကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ ထဲက ရေတဗူး ယူသောက်လိုက်တာ။ မီးဖွင့် မထားခဲ့တော့ ရေကလည်း မအေးပြန်ဘူး။ အခန်းထဲ ရောက်ကတည်းက နွေးကိုနွေး အနိုင်နိုင် ထိန်းရင်း လုပ်နေတာတွေကို ဆရာက ထိုင်ကြည့်နေတုန်းပဲ။
မူးတဲ့အရှိန်က မြင့်လာတာနဲ့ အိပ်ယာကို မခင်းနိုင်တော့တာ။ ဆရာကို ပြန်ဖို့ နူတ်ဆက်မိလား မဆက်မိလား မသိတော့ပါဘူး ကုတင်ပေါ် ထိုးအိပ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ဘယ်လို အိပ်ပျော်သွားမှန်း မသိဘူး အတော်လေးကြာမှ ရေမွှေးနံ့ရော ချွေးနံ့ရော ရလိုက်လို့ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ နွေး ဆရာနဲ့ ကလပ်က ပြန်လာတဲ့အတိုင်းပဲ အဝတ်စားက ရောက်တာနဲ့ အိပ်ပစ်တော့ တရေးနိုး အမူးပြေကာစလေးပေါ့။ ချွေးနံ့က နွေးခင်ပွန်း ချွေးနံ့မဟုတ်တာ ချက်ခြင်းသိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နွေနဲ့ တအိပ်ယာထဲ အတူနေတာက ဘယ်သူလဲ အမြန် စဉ်းစားလိုက်တော့ မျက်လုံး ပြူးသွားရတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ နွေးကို ပြန်လိုက်ပို့တာ ဆရာ ဦးနိုင်မော်လေ ဒါဆို သူ မပြန်သေးတာနေမယ်။
နွေး တွေးမိတာနဲ့ မျက်လုံးတွေ အားယူပြီး အကြည့် ရွေ့လိုက်တာပေါ့။ သေချာတယ် နွေးတို့ လင်မယား အိပ်ခန်းလေးထဲပါပဲ မီးရောင်ရောက် ကုတင်ပေါ်မှာ နွေးက ကိုယ်တစောင်း အနေထားနဲ့ နွေး ဗိုက်နားလေး မျက်နှာချင်းဆိုင် တင်ပလွဲ ဝင်ထိုင်နေတာက ဆရာ ဦးနိုင်မော်ပါ။ နွေး စကပ်ထမိန် ပေါင်လယ်ထိ ခွဲထားတဲ့ နေရာလေးက လှန်နေပြီး ပေါင်တန်တုတ်တုတ် ဖွေးဖွေးလေးက ထပ်လျက်လေး ပေါ်နေတာပေါ့။ ဆရာက နွေး ပေါင်ဂွလေး ကြည့်ပြီး ဟိုးအရင်ကလိုပဲ သူ့ပေါင်ကြားက ဟာကို ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သပ်နေတာ။ ဆရာ့ ပေါင်ကြားက ဟာကြီး အနီးကပ်မြင်တော့ နွေး သွေးသားတွေ ဆူပွက်လာတယ် အာခေါင်တွေ ခြောက်ကပ်လာပြီး ရေငတ်လာသလို ခံစားလာရတာပဲ။ ဆရာကတော့ နွေး နိုးနေတာ မသိပါဘူး နွေးပေါင်ဂွလေးကို စူးစိုက်ကြည့်နေတာပါ။ နွေး ဆရာ့ ဟာကြီးကို အနီးကပ် မကြည့်ရဲလို့ အိပ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်လုံးလိမ့်သလို လုပ်ပြပြီး ကျောပေးထားလိုက် မိတယ်။
မကြာပါဘူး နွေး ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ပေါ် တင်ထားတဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်ကို ဆရာက ဒူးခေါက်ကွေးက ကိုင်ပြီး အပေါ် တွန်းတင်နေတာ။ နွေးဝတ်ထားတဲ့ အညိုရောင်ဗျောင် ထမိန်စကပ်က အပျော့သားမို့ ဆရာ ဆွဲလှန်တော့ ပေါင်လယ် အကွဲနေရာလေးထဲက ပေါင်တန်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်အောက် ထမိန်စက ဖိထားလို့ ကျန်နေပေမယ့် ညာဘက်ဒူးကွေးတင်ခံရတဲ့ ဘက်က ခါးထိ လှန်တက်လာပြီး နွေး ခါးပေါ် ဆရာ့ နှာခေါင်းက ထွက်တဲ့ အငွေ့နွေးနွေးလေး ကျရောက်နေပြန်ရောပဲ။ နွေးဖင်ကြီးက မိန်းမချင်းတောင် ငေးယူရတာမို့ ဘေးတစောင်း လှည့်အိပ်လိုက်တော့ ခွက်နေတဲ့ ခါးလေး အောက် ဖင်သားစိုင်ကြီးက ဆရာ့ဘက် ပစ်ပြထားသလို ဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်။
တွေးမိရုံနဲ့ စိတ်ထဲ ရှိန်းကနဲ့ ဖြစ်လာပြီး အောက်က အရည်ကြည်လေး စိမ့်ထွက်လာရတယ်။ဆရာ့လည်း နွေးဖင်ကို အနီးကပ် ကြည့်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံပါ အသက်ရှုသံတွေ ပျင်းလာတာ ကြားနေရတယ်။ နွေးက ကိုယ်တစောင်း အနေထားမို့ ဆန့်ထားတဲ့ဘယ်ဘက်ပေါင်နဲ့ ဒူးကွေးထားတဲ့ ညာဘက်ပေါင်ကြား ဆရာက ဒူးထောက် ဝင်ထိုင်နေပြီ။ ဆရာ မျက်လုံးတွေက နွေး အောက်ပိုင်းပဲ ကြည့်နေတာလေ နွေးခိုးကြည့်နေတာကို သတိထားမိပုံ မပေါ်ပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားနေရင်း နွေးခါးပေါ်ထိ လှန်တက်နေတဲ့ စကပ်ထမိန် အောက်နားစကို မပြီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးလေးကို ဟကြည့်တော့ လက်တွေ တုန်နေရှာတာ။ ခဏနေတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ဟန်နဲ့ နွေးခါးကို တွန်းပြီး ပက်လက်အနေထား ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာပဲ။
နွေး အလိုက်သင့် ကိုယ်လုံးကို လှန်ပေးနေမိတာပါ ပက်လက်အနေထား ရောက်တော့ စကပ်ချိတ်ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး အောက်ကို မရမက ဆွဲချွတ်ပစ်တယ်။ ထမိန်ကျွတ်တာနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကိုပါ လိပ်ချွတ်ပစ်တာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ နွေး နိုးလာလည်း ရင်ဆိုင်မယ့် ပုံစံ ပြောင်းသွားပါပြီ။ နွေး အဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ ဖြဲပြီး ပွတ်သပ်နေတော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ အားမလို အားမရဖြစ်နေရတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် လက်နဲ့ ဆက်မလုပ် စေချင်တော့ဘူး။ ပါးစပ်နဲ့လျက်ပေးတာ နွေး ပိုပြီး နှစ်ချိုက်တာပါ။ တော်ပါသေးရဲ့ နွေး တောင်းတတုန်း အစိလေးကို ဖိချေရင်း ဖင်ဝနဲ့ အခေါင်း ပေါက်လေးကြား လျှာဖျားနဲ့ ထိုးစွနေတယ်။ ပြီးမှ လျှာလေးက အပေါ်တက်လာပြီး အစိနားလေးထိ ယက်ပေးနေတာ။
ဘောင်းဘီ မခံထားတော့ ဆရာ့ လျှာနဲ့ နွေးဟာလေး အသားစိုင်ချင်း ဒါရိုက် ထိတွေ့တော့ အရသာက ပိုကောင်းနေတယ်။ ” အားးးး … အ …… ဆရာ ရယ် ” နွေး အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်ရင်း ထိန်းမရတော့ပါဘူး။ နွေး အိမ်ထောင်သက်တမ်း တလျှောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆီကတောင် မရဖူးတဲ့ အရသာလေးလေ။ နွေး ညည်းသံလေးကြောင့် မျက်နှာကို တချက် လှမ်းကြည့်ရင်း ပြန်ယက်ပေးတော့ လှုပ်ရှားမှုတွေက ပိုမြန်လာတယ်။ ” အဟင့် … ဟင့် ” အလိုလိုနေရင်း မျက်ရည်လည်လာပြီး ဝမ်းနည်းလာသလိုပဲ ဆရာ့ကို ကြည့်တော့ မျက်လုံးချင်းဆုံနေကြတာ ဆရာလည်း နွေး ရှိုက်သံကြောင့် ယက်ပေးနေရာက ရပ်ပြီး နွေးမျက်နှာကို လှမ်းကြည့်နေပုံပါ။ နွေးကို စိုက်ကြည့်ပြီး အစိလေးကို ပါးစပ်ထဲ စုပ်ယူရင်း အထဲရောက်မှ လျှာဖျားနဲ့ ထိုးစွပေးနေတာ။
မိန်းမတယောက်ရဲ့ ကာမအရသာ ပေးစွမ်းနိုင်ဆုံး အစိလေးကို ပါးစပ်ထဲထည့် စုပ်နေတော့ နွေး တကိုယ်လုံး ဆရာ့ ပါးစပ်ထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အသံထွက် ညည်းချင်ပေမယ့် မထွက်အောင် မနဲ ထိန်းထားရတယ်။ နွေး ကာမစိတ် ပြင်းထန်နေတာ ဆရာ မသိစေ ချင်ဘူး။ ပါးစပ်ထဲ အစိလေးကို ထိတယ် ဆိုရုံလေး လျှာနဲ့ ဝိုက်ပြီးမှ ဆွဲစုပ်ပေးနေတော့ နွေး ပေါင်တန်တွေ တဆက်ဆက် တုန်လာတော့တာ။ ရင်တွေ တဒုတ်ဒုတ် ခုန်ပြီး လှိုင်းစီးနေရသလိုပေါ့။ ကိုယ်လုံးလေး နိမ့်သွားလိုက် မြင့်လာလိုက်နဲ့ မောဟိုက်နေပြီ။ နွေး ပြီးချင်လာပြီ ဒီခံစားမှု့ကို ထိန်းထားရတာလဲ ပင်ပန်းနေပြီ။
” အ …… အမလေးးးး … ရှီးးးး … မ မ မ ရ တော့ ဘူး … ဆရာရယ် …… ထွက် ကုန် ပြီ ” တွေးနေတုန်း နွေး အရည်တွေ ပန်းထွက်ရင်း လူတကိုယ်လုံး ချောက်ထဲ ထိုးကျသွားသလိုပဲ။သတိထားပြီး ထိန်းလိုက်ပေမဲ့ ခြေဖျားထိပ်တွေကော့တက်သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်က ဆရာခေါင်းကို ဆွဲရင်း နွေး အဖုတ်လေးနဲ့ ကပ်ထားမိတာ။ အသက်မျှင်းရှုပြီး အနားယူနေတုန်း ဆရာက သူ့ဘောင်းဘီ ချွတ်ရင်း အတွင်းခံကို တဆက်တည်း ဆွဲချွတ်ပစ်တယ်။ အသားဖြူပေမယ့် ပေါင်ကြားထဲ ဆရာ့လီးက နီညိုရောင် သန်းနေပြီး နွေးခင်ပွန်း ကိုကြီးစိုးမြင့် လီးထက် အတုတ်ရော အရှည်ရော သာနေတာပဲ။ တချက် နှစ်ချက် စွလိုက်တာနဲ့ ဆရာ့ လီးကြီး အကြောတွေ ထင်းလာပြီး ထောင်မတ်လာတယ်။ နွေး ပေါင်ကြားထဲ ဒူးထောက်နေရာ ယူတော့ နွေး အသက်ပြင်းပြင်း ရှုထားလိုက်တာ။
နွေးအဖုတ်လေး တင်းကနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး ခြေထောက် အကြောတွေ လှုပ်မရအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ” အဟင့် ဟင့် … အဲတာတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ် … နွေး … ခွင့် မပြုချင်ဘူး … အထိအတွေ့မှာ … သာယာပေမယ် … အဆုံးထိ မသွားချင်ဘူး ဆရာ … ဟင့် ဟင့် ” နွေးကသာ ပြောနေတာ ဆရာက နောက်မဆုတ် တော့ပါဘူး တရစ်ချင်း နွေးဟာထဲ ဖိထည့်နေတာ။ ” ခုမှတော့ မထူးတော့ ပါဘူး နွေးရယ် …. ဆရာ … မထိန်းနိူင်တော့လို့ပါ ” ဆရာ့လီး အတွင်းထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးဝင်လာပြီး ဆီးခုံးချင်း ကပ်တာနဲ့ အထဲက နာကျင်လာလို့ သက်သာလို သက်သာညား ခေါင်းကိုမော့ပြီး ရင်ဘတ်လေး ကော့လိုက်မိတယ်။
နွေး ရင်ကော့လိုက်တာနဲ့ ဖက်ဖူးစိမ်းရောင် ကိုယ်ကျပ်အင်္ကျီလေးရဲ့ အောက်နားစကို လည်ပင်းနားထိ ပင့်တင်ပစ်တာ။ ဆရာ့ လက်တွေက အပေါ်တက်လာပြီး နွေးရဲ့ ဘော်လီအလယ်ကို လက်နဲ့ အောက်ကို ချိတ်ဆွဲ ချလိုက်တာ။ နို့အုံ နှစ်ဖက်လုံး ရုန်းထွက်လာတော့ အောက်ဆွဲချထားတဲ့ ဘော်လီက ပင့်ထိန်းပေးသလိုဖြစ်ပြီး နို့အုံတွေက ပြူးထွက်လာတယ်။
နွေးထင်တာ ပါးစပ်နဲ့ စို့ပေးမယ် ထင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလယ် ကြားထဲ နို့သီးခေါင်းကို ညှပ်ပြီး လက်ဖမိုးက နို့အုံကို ဖိပွတ်နေတော့ ခံစားမှု့က တမျိုးလေးပဲ။ အရသာ အသစ်လေး ခံစားနေတုန်း လက်ဖမိုး ပြန်မှောက်ရင်း လက်ညိုးနဲ့ လက်မကိုသုံးပြီး နို့သီးခေါင်းကို ညှစ်ချေပစ်တယ်။ နို့သီးခေါင်းလေး ကျိန်းလာပေမယ့် ခံစားမှု့က ကောင်းလာလို့ အသံထွက် ညည်းပြီးမှ ရှက်မိနေတာ။ နွေး အထဲက ဆရာ့ လီးက မလှုပ်ရှားသေးဘူး အတွင်းထဲ သပ်လျိုထားသလို လှုပ်လို့လဲ မရသေးဘူး။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ယားလာပြီး မသိမသာ ကော့ပေးတော့မှ ဆရာက သူ့ဟာကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း အသွင်းအထုတ်စလုပ်လာတယ်။ အထဲဝင်လာတိုင်း နှင့်နေအောင်ခံစားရပြီး ပြန်ထွက်သွားတိုင်း ဟာပြီး ကျန်နေရစ်တာပဲရှင်။
နွေး ခံနိုင်လာတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပစ်ဆောင့်လာတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ အတိုင်း နွေး နို့နှစ်လုံးကလည်း အောက်က ဘော်လီထိန်းထားတာတောင် လှုပ်ရမ်းနေတော့တာပဲ။ ရုတ်တရက် ဆရာက ဆောင့်ချက်တွေ ရပ်ပြီး နို့သီးခေါင်း တဖက်ကို ငုံ့ပြီး ဆွဲစုပ်တော့ နွေး ကျောပြင်ပါ ကော့တက်သွားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် အထဲက တင်းကြပ်တဲ့ ခံစားမှု့က လျော့မသွားသေးဘူး။ အောင့်ခံနေတဲ့ နွေး မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ဆရာက သဘောတွေ့နေပုံပဲ။ ရရှိလာတဲ့ ခံစားချက်ကို နွေး ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမှန်း မသိပါဘူး နို့စို့ရင်း ဆောင့်လုပ်ပေးတဲ့ အရသာက နွေးအတွက် ကောင်းလွန်းလို့ သေးတောင် ထွက်ချင်လာတာ။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရတော့လို့ အသံကျယ်ကြီး အော်ပြီး ညည်းပစ်လိုက်တယ်။ ဆရာ အစိကို လျှာနဲ့ ယက်ပေးတဲ့ အရသာနဲ့မတူတဲ့ ခံစားမှု့တွေက နွေး သွေးသားတွေ ဆူပွက်စေတာ။နို့စို့ခံရင်း အတွင်းသားထဲ လီးရဲ့ အရည်ပြားနဲ့ ထိပ်ခေါင်းက ချိတ်ဆွဲ ပွတ်တိုက်မှု့တွေ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။
တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူး လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ယာခင်းတွေ ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း နွေး ဖင်ကြီး လေပေါ် အလိုလို မြှောက်တက် သွားရတာပေါ့။ အရည်တွေ အဆက်မပြတ် ထောင်ပန်းပြီးမှ အရုပ်ကြိုးပျက်သလို ဘုံးကနဲ့ ကုတင်ပေါ် ဖင်သားစိုင်ကြီး ပြန်ကျလာတယ်။ နွေးကိုယ်လုံးလေး တွန့်လိမ်ပြီး ခဏအကြာမှ ငြိမ်ကျသွားတော့တာ။ နွေးငြိမ်သွားတာနဲ့ ဆရာ့က အဖုတ်ထဲ စိမ်ထားထဲ သူ့လီးကို ထုတ်ပြီး ဘယ်လက်လက်ကို နွေး ရင်ဘတ်ဘေး တံတောင်ဆစ်နဲ့ ကွေးထောက်ပြီး နို့သီးခေါင်းတွေ ပြန်စို့နေတာ။ အားရပါးရစို့ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကို မနာအောင်သွားလေးနဲ့ ခဲလိုက်တော့ နွေး တုန်ကနဲ့ ဖြစ်သွားရောပဲ။ ဆရာခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုပ်ကိုင်ရင်း နို့နဲ့ ပါးစပ် ကပ်ထားပြီး မျက်လုံးလေး မိတ်ထားလိုက်တယ်။ ” နွေး … ဆရာ့ကို လေးဘက်ကုန်းပေးပါလား ” ” အိုရ် … ဆရာကလည်းနော် ” နို့စို့တာရပ်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာ့ စကားကြောင့် နွေး ရှက်မိသွားတယ်။
ခင်ပွန်း မဟုတ်တဲ့ သူစိမ်းယောင်္ကျားရှေ့ နွေးဖင်ကြီး ကုန်းထားရမှာ တွေးမိရုံနဲ့ ရှက်လည်းရှက် အဖုတ်လေးထဲကလည်း ဆစ်ကနဲ့ ဆစ်ကနဲ့ ခံစားလိုက်ရတာပေါ့။ ” လုပ်ပါ … နွေးရယ် … အဝေးကြီးက လာရတဲ့ … ဆရာ့ကို မသနားဘူးလား ” ဆရာက ကလေး တယောက်လို ပူဆာနေလို့ နွေး လိုက်လျောပေးလိုက်ပါတယ်။ နွေးပြီးသွား ပေမယ့် ဆရာ မပြီးသေးတာ ရိပ်မိတာပေါ့်။ ဆရာ့ လီးကြီးကို နွေး ကြိုက်သွားတော့ ရှက်လည်းရှက် ခံလည်းခံချင်တာနဲ့ မျက်လုံးကို မိတ်ထားလျက်လေးပဲ ခေါင်းငြိမ့်ရင်း ကုန်းထလိုက်တာ။ နွေး လေးဘက်ကုန်းပေးတော့ ဆရာ့ လီးကြီးက အဖုတ်ထဲ နောက်ကနေ ခပ်စီးစီးလေး ပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်ရင်း အရှိန်ရလာတော့ နွေး ခါးလေးကို စုံကိုင်ပြီး နောက်ကနေ မနားတမ်း ဆောင့်လုပ်တော့တာပဲ။ ဆရာ့ လီးကြီး နွေး အဖုတ်လေးထဲ တဘွတ်ဘွတ်နဲ့ ဝင်ထွက်နေပြီ။ ခံလို့ကောင်းပေမယ့် တချက်တချက် တိုးဝင်လာတဲ့ လီးထိပ်က သားအိမ်ဝ လာဆောင့်တော့ ခေါင်းအုံးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကလည်း တအားအားနဲ့ အံကြိတ်ခံနေရတယ်။
အတော်ကြာကြာလေး အလုပ်ခံပြီးမှ နွေး ဟာလေးထဲ ပူကနဲ ဆရာ့ အရည်တွေ ဝင်လာတော့တာ။ ဆရာလည်း အားကနဲ့ ညည်းရင်း နွေးခါးကို ဆွဲပြီး နွေးဖင်ကို ဆီးခုံးနဲ့ ဖိကပ်ထားရင်း အရည်တွေ အကုန် ညှစ်ထည့် ပြီးမှ သူ့လီးကြီး ဆွဲထုတ်သွားတယ်။ ခဏနားပြီး ဆရာပြန်မယ် ထင်နေတာပေါ့။ ပက်လက်အနားယူရင်း နွေးပေါင်ကြားထဲ လက်နဲ့ပွတ်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် နွေး အံအော သွားခဲ့ ရတယ်။ ” နွေး … ဆရာ ဒီမှာပဲ … ညအိပ်လိုက်မယ် … နွေးခင်ပွန်း … ပြန်မလာသေးဘူး မလား ” ” နောက် … ၃ရက်လောက် ကြာဦးမယ် … ပြောတယ် ဆရာ … အိပ်ချင် အိပ်သွားလေ ” ဆရာက သူ့ကားနောက်ခန်းက အဝတ်အိတ်လေး ယူပြီး အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတယ်။ နွေးတို့ လင်မယား အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ ဆရာနဲ့ နွေး အတူအိပ်လိုက်ကြတာ။ နွေး တညလုံး ဆရာများ ထပ်စဦးမလားလို့ မျှော်လင့် မိပေမယ့် သူနေတဲ့မြို့ကနေ ဒီထိ ကားမောင်းလာလို့ ပင်ပန်းရှာတာနေမယ် တခူးခူးနဲ့ ဟောက်ပြီး အိပ်တော့တာပဲ။ နွေးဘဝ ပထမဆုံး အကြိမ် သူစိမ်းယောင်္ကျားနဲ့ အတူအိပ်ဖူးတာပါ။
မနက်လင်းတော့ နွေး ဆရာ့အတွက် မုန့်နဲ့ ကော်ဖီ အဆင်သင့် လုပ်ထားလိုက်တယ်။ ညက သောင်းကျန်းမိလို့ နွေးကိုယ်လုံးက အနံ့ထွက်နေတာနဲ့ ရေချိုးဖို့ စဉ်းစားလိုက်တာ။နွေး ရေချိုးပြီး ရေချိုးခန်းက ထွက်တော့ ဆရာက ရေချိုးခန်း တံခါးနား ရောက်နေပြီ။ ” ဟော … ဆရာ နိုးလာပြီပေါ့ ” ” အင်း … ရေသံ ကြားတာနဲ့ … ဆရာလည်း … နိုးလာတာပါ ” နွေး ရေစိုထမိန်ကို ဆရာရှေ့ ဖြန့်ဝတ်ပြီး ရင်ပြန်လျားတော့ ထမိန်ကကပ်နေပြီး နိုအုံကြီးက ထင်းနေပြန်ရော။ ချက်ချင်းပဲ ဆရာ့ ပေါင်ကြားက ဟာကြီး ဆက်ကနဲ့ ခုံးထလာတယ် မျက်လုံးတွေက ရေစိုပြီးပါးကပ်နေတဲ့ နွေးထမိန် အောက်က အဖုတ်အရာကြီးဆီ ရောက်နေတာပေါ့။နွေးလည်း ဆရာ့ ပေါင်ကြား ကြည့်မိတော့ အဖုတ်ထဲက ဆစ်ကနဲ့ ခံစားလိုက်ရတာပါ။
” ဘာကြည့်နေတာလဲ … ဆရာရဲ့ … ခ်ခ် ခ်ခ် ” နွေး မျက်စောင်းလေး ပစ်ပြီး ရေချိုးခန်း နံရံက ဘားတန်းပေါ် တင်ထားတဲ့ တဘက်ကို လှမ်းယူတော့ ကိုယ်လုံးပါ လှည့်လိုက်ရတယ်။ ကိုယ်လုံးလှည့်တာနဲ့ ဆရာ့ မျက်လုံးတွေက နွေး ဖင်ကြီးကို မလွတ်တမ်း လိုက်ကြည့် နေပြန်ရောပဲ။ ” လှလို့ကြည့်မိတာပါ … နွေးရယ် … ကိုယ်လုံးရော … ရုပ်ရည်ရော … နွေးယောင်္ကျား … ကိုစိုးမြင့် တော့ မိန်းမရတာ … အတော်ကံကောင်းတယ် ” ” မြှောက်မနေပါနဲ့ … ဆရာရယ် … နွေး ဆရာ့ဖို့ … မုန့်နဲ့ ကော်ဖီ … အဆင်သင့် လုပ်ထားပါတယ် … ဧည့်ခန်းထဲမယ် ” ” ဆရာ့ … မနက်စာက … ဒီမှာလေ နွေးရဲ့ ” ” အိုးးး … ဆရာ ကလည်း … ဟွန့် ” စကားပြောရင်း ဆရာက နွေးနား တိုးကပ်ပြီး ပေါင်ကြားလေးထဲ လက်နဲ့ ထိုးပြနေတာ။ ” ကဲပါ … လန်းသွားအောင် ရေ အရင်ချိုးလိုက်နော် … ဆရာ … နွေး အဝတ်လဲလိုက်ဦးမယ် ” ပြောပြီး ဆရာ့ဘေးက ကပ်ထွက်ခဲ့ လိုက်တယ်။
အိပ်ခန်းထဲက ရေချိုးခန်းမို့ အပြင်ထွက်ပြီးတာနဲ့ ရေလဲထမိန် လဲပြီး ဆံပင်တွေ ခြောာက်အောင် သုတ်ပစ်နေတာ။ နွေး ဆံပင်တွေ သုတ်တုန်း ရေသံတွေ ကြားနေရတယ် ဆရာလည်း ရေချိုးနေပါပြီ။ နွေး ဆံပင်တွေခြောက်တော့ အဝတ်ဘီဒိုထဲက အင်္ကျီနဲ့ စကပ် တွဲလျက်လေး ခေါင်းပေါ်က စွပ်ချလိုက်တယ်။ အဲချိန် ဆရာ နောက်က ရောက်လာပြီး စကပ်အောက်နားစထဲ လက်သွင်းပွတ်နေတာ။ စကပ်လေးက ပေါင်လည်ထိပဲ ဖုံးတော့ လက်သွင်း တာနဲ့ နွေး အဖုတ်လေး တန်းထိတော့တာပေါ့။ ” အအေး ပတ်နေမယ် … ဆရာရဲ့ … လွတ်ပါ … နွေး ရေသုတ်ပေးမယ် … လာ ” စကားပြောရင်း နွေးကိုယ်လုံး လှည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးပြူးသွားရတယ်။ ဆရာက ၂ယောက်ထဲရှိတယ် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ရေချိုးခန်းက ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ထွက်လာတာ။ နွေး နဲနဲ ရှက်မိပေမယ့် ဆရာ့ကို ကုတင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်းရင်း တဘက်သုတ်ပေးနေမိတယ်။ ခေါင်းကနေ စပြီး မျက်နှာ ကျော ရင်ဘတ် ဗိုက်သားတွေ သုတ်ပေးနေတုန်း ဆရာ့ပေါင်ကြားထဲ လီးက ထောင်မတ်လာတာ။
လီးဆီ တဘက်လေး အုပ်တုန်း နွေးပုခုံးကို ဆွဲပြီး ကုတင်ပေါ် လှဲချပစ်တယ်။ နွေး ပါးပြင် ဖောင်းဖောင်းလေးကို လည်တိုင်လေးကို ဆွဲစုပ်နေတော့ ဆရာ့ ဘယ်ဘက်ပုခုံးပေါ်မှေးတင်ပြီး နွေးနို့အုံတွေနဲ့ ရင်ဘတ်ချင်း ပြားနေအောင် ကပ်ပေးမိတယ်။ ဆရာ့လက်တဖက်က ပေါင်လယ်ထိပဲ ဖုံးတဲ့ နွေးစကပ် အောင်နားစလေးထဲ ဝင်လာပြီး ဖင်သားစိုင်တွေ ဆုပ်နယ်ရင်း ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ရော။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ဒီလို နေရမှန်း နွေးမသိခဲ့တာ ခု ဆရာနဲ့ကျမှ အယုအယ အပွတ်သပ်တွေက စိတ်ကို နိုးကြွစေကြောင်း သိခဲ့ရတယ်။ ” နွေးက … တအားလှတာပဲကွာ ” ပုခုံးပေါ်မေးတင်ထားတဲ့ နွေး မေးဖျားလေးကို နမ်းရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောနေရင်း နှုတ်ခမ်းလေး ဟပြီး တေ့စုပ်တော့ ရင်ထဲ ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲပဲ။
နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်မိတော့ နွေးလည်း အာကျမခံ ဆရာ့ လျှာဖျားလေး စုပ်ပြီး တုံ့ပြန်ပေးနေမိတယ်။နှစ်ယောက်သား တင်းကြပ်စွာ ဖက်ရင်း ဝင်သက်ထွက်သက် တွေ မြန်လာခဲ့တာပေါ့။ အတွေ့အာရုံမှာပဲ ရစ်မူးနေတုန်း နွေး အဖုတ်နဲ့ ဖိထားတဲ့ ဆရာ့လီးက အက်ကွဲကြောင်းထဲ အမြှောင်းလိုက် မာထင်လာတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်းသွားရတယ်။ နွေး အစိလေးက ဆရာ့လီး အရည်ပြား ကို ဖိထောက်ရင်း ငေါက်ကနဲ့ ငေါက်ကနဲ့ ဖြစ်ပြီး အထဲက အရည်လေးတွေပါ စိမ့်ထွက်လာတာ။ ” နွေး … အင်္ကျီချွတ်လိုက်နော် ” ဆရာ့ ကိုယ်ပေါ်မှောက်ထားရာကနေ ခါးဆန့်ရင်း ပေါင်လယ်က စကပ်အောက်နားစလေး မပြီး ဖင်ကြီးကြွ အပေါ်ပင့်ချွတ်တော့ တွဲလျက်အင်္ကျီလေးပါ ချွတ်ပြီးသားပဲ။ ညက မူးနေလို့ စိတ်ရဲပေမယ့် ခုလို မနက်ခင်း ပြတင်းပေါက်က ဝင်လာတဲ့ အလင်းရောင်လေးအောက် ဆရာနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး နေမိတော့ ရှက်စိတ်လေး ဝင်လာတာပေါ့။
ရုတ်တရက် လီးတဆုံး လိုးခံလိုက်ရလို့ နွေး ခေါင်းလေးမော့တက်ပြီး အားကနဲ့ အသံထွက် အော်လိုက်မိတယ်။ တအိမ်လုံး နွေးနဲ့ ဆရာ ၂ယောက်ထဲမို့ နွေး ခံစားမှု့အတိုင်း ဖွင့်ချပစ်တာပေါ့။ ဆရာကလည်း စသိကတည်းက တိတ်တခိုး စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ နွေးဖင်ကြီးကို နောက်က ကြည့်လိုးချင်တယ် ပူဆာလို့ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ လေးဘက်ကုန်းပေး လိုက်တာလေ။ ” ဗျစ် … အ … ဘွတ် ဖွပ် …… အမလေးးးး ” နွေးဖင်ကြီး အစွမ်းကုန် ကော့ပေးထားတော့ ဆရာ့ ဆောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်နေတယ်။ လီးဝင်လာတိုင်း တောင့်ခံပေးပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းသားတွေနဲ့ လီးကို ပြန်ညှစ်ပေးနေလိုက်တာ။
” ရှီးးးးးးးးးးးး … ကောင်းလိုက်တာ … နွေး ရယ် … အိမ်ထောင်သည် ဆိုတာ မယုံနိုင်စရာပဲ … အင့် … ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” နွေးလည်း အံကြိတ်ခံနေရတာပါ။ တကယ်လည်း နွေး အဖုတ်လေးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုကြီးစိုးမြင့် လီးတချောင်းပဲ ဝင်ဘူးတာလေ ဆရာ့ လီးက ခပ်တုတ်တုတ်မို့ စောက်ခေါင်းထဲ စီးကျပ်နေတာပေါ့။ အဖုတ်ထဲ လီးအရည်ပြား ပွတ်တိုက်မှု့ကြောင့် အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်လာမှ လီးအဝင် အထွက် ကောင်းလာခဲ့တာ။ လီးအရသာ ခံစားမိတော့ နို့အုံနှစ်ဖက် တင်းမာလာတယ် ဆရာက နွေး ခါးလေး ကိုင်ပြီး ဆွဲလိုးနေရာက နို့အုံနှစ်ဖက် ပြောင်းကိုင်ပြီး ပစ်ပစ် လိုးတော့တာပဲ။ ” ရှီးးးးးးးးး … ကောင်းတယ် သိပ်ကောင်းတာပဲ … ဆရာရယ် … နွေး ဒီလို မခံစားဖူးဘူး … အ အားးး … ရှိးးးးးးးးး … ဘွတ် ဘွတ် … ဗျစ် …… အ အားးးး ဖွပ် ဘွတ် … အမလေးးးး ကျွတ်ကျွတ် ” ဖျက်ကနဲ့ ကုတင်ခေါင်းရင်းက နွေးခင်ပွန်း ကိုကြီးစိုးမြင့်နဲ့ နွေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင် အမှတ်တရ ဓတ်ပုံကြီး မြင်တော့ စိတ်ထဲ ဖေါ်မပြနိုင်တဲ့ ဝေဒနာလေး ဝင်ရောက်လာတယ်။
နွေးတို့ လင်မယားအိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ဖင်ကြီးထောင်ပြီး သူစိမ်းယောင်္ကျားတဦးကို မက်မက်မောမော အလိုးခံနေတဲ့ နွေးကို ကိုကြီးစိုးမြင့် မြင်ရင် ဘယ်လိုခံစားနေမလဲ ဆိုပြီး တွေးနေမိတာ။ အဲချိန် ဆရာက ဒူးညှောင်းလာလို့် ပုံစံ ပြောင်းလိုးဖို့ ပြောနေပြန်တယ်။ ” နွေး … နောက်တမျိုး ပြောင်းလိုးရအောင် နော် ” ” ဟင့် … ခံလို့ ကောင်းနေမှ … ဆရာကလည်း ” ပြောလည်းပြော လီးကို ဆွဲထုတ်တော့ နွေးလည်း ဖင်ကြီး ဘေးလွဲချပြီး အဖုတ်ထဲက ကျွတ်ထွက်လာသော လီးကြီးကို ကြည့်နေမိတာ။ အဖုတ်ထဲက အကျိအချွဲတွေ ကပ်နေတဲ့ ဆရာ့လီးကြီးက ခါရမ်းနေတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ ကာမသုခတွေ ပေးစွမ်းရင်း ကော့ပျံနေအောင် လိုးနိုင်တဲ့ လီးကြီး ကြည့်ရင်း အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်က တဖွားဖွား ဖြစ်နေတုန်းပဲ။
ငေးကြည့်နေတုန်း ဆရာက ကုတင်အောက် ဆင်းပြီး မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားနဲ့ နွေး ကို ပက်လက် လှန်ခိုင်းနေတာ။ နွေးဖင်ကြီးကို ကုတင်စောင်း ဆွဲယူပြီး မေးတင်လိုက်ရင်း ပေါင်နှစ်ဖက် ဆွဲမြှောက်ဖြဲပြီး ဖေါင်းကြွနေတဲ့ အဖုတ်ထဲ လီးထိပ်တေ့ ဆောင့်လိုးနေတယ်။ ” အားးးး …… အ … ဆရာရယ် …… ရှီးးးးးးး ” ဆီးခုံးချင်း ကပ်တဲ့အထိ ဆောင့်လိုးတော့ လီးထိပ်က နွေး သားအိမ်ဝ ဆောင့်မိနေတာပေါ့။ အချက် ၅၀ခန့် မနားတမ်း ဆောင့်လိုးပြီးမှ နွေး ပေါင်တန်ဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်တွေကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်တယ်။ ကုတင်စောင်း နွေးပေါင်ကြားထဲက အဖုတ်က မော့ပေးထားသလို ဖြစ်သွားရတာ။ ဆရာက စိတ်ကြိုက် အနေထားရောက်တော့ ဖေါင်းကြွနေတဲ့ အဖုတ်ကို ကုတင်အောက် မတ်တပ် ရပ်လျက် အနေထားနဲ့ မီးပွင့်မတတ် လိုးတော့တာပဲ။ ထိထိမိမိ လိုးချက်များအောက် နွေးလည်း ခေါင်းလေး ရမ်းခါပြီး တအားအား အော်ဟစ်နေရတယ်။
” အားးးး …… ကောင်းလိုက်တာ … ဆရာရယ် … ဆောင့်ဆောင့် … ဟုတ်တယ် … မညှာနဲ့ …… လိုးစမ်း … အမလေးးးး အ အားးးး …… ရှီးးးးးးးးး အ အ ” နွေး စကားအဆုံး ဆရာလည်း အံကြိတ်ပြီး အားရှိသလောက် မနားတမ်း ပစ်လိုးနေတာ။ ” ဘွတ် …… အ …… ဗျစ် …… အားးးး …… အမလေးးး … သေပြီ သေပြီ …… နွေး သေတော့မယ် …… ကောင်းလိုက်တာနော် …… နွေး သေတော့မယ် … ဆရာရဲ့ ” ကာမစိတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ နို့အုံနှစ်ဖက်ကို နွေးလက်နဲ့ ဆွဲညှစ်အော်တော့ နွေး မျက်နှာလေး ကြည့်ပြီး ဆရာက ပုခုံးပေါ်ထမ်းထားတဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက် ဆွဲရင်း တရကြမ်း လိုးနေတယ်။
” အ အားးးး … ဆရာရယ် … ဆောင့်ပေးဦး … အမလေးးး …… ကျွတ်ကျွတ် … ကောင်းလိုက်တာ …… မရပ်နဲ့နော် ဆောင့်စမ်းပါ … အင်းဟင်း အားးး အားးးးး ” နွေး အထဲက တဆစ်ဆစ်နဲ့ ယားတက်လာလို့ အားမလိုအားမရညည်းရင်း ဆရာ ပစ်ဆောင့်တိုင်း အောက်က ကော့ထိုးပေးနေမိတာပါပဲ။ကော့ပျံ ညည်းတွားရင်း ပယ်ပယ်နယ်နယ် အလိုးခံနေ ရတော့ အားရကျေနပ် မိတယ်။ ဆရာလည်း နွေးမျက်နှာ စိုက်ကြည့်ရင်း အားကုန် ဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် နဲ့ အဖုတ်ထဲ လရည်တွေ ပန်းထည့်နေပြီ။
နွေးလည်း ကိုယ်ပေါ်ကျလာတဲ့ ဆရာ့ ကျောပြင်ကို ဖက်ပြီး ဖင်ကြီး ကော့ထိုးရင်း စောက်ရည် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။ ခဏနားရင်း ဆရာ မနက်စာ စားပြီး နွေးတို အတူဖက်အိပ်ကြတယ်။ နေ့လည်ပိုင်း ဆရာ သူမြို့ကို ပြန်ကာနီး နွေးပါးပြင်လေးကို မက်မက်မောမောနဲ့ အကြာကြီး နမ်းပြီးမှ ပြန်သွားရှာတာ။ရက်မှလ လမှနှစ် ရာသီ အလီလီ ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် ဆရာနဲ့ နွေးတို့ အဖြစ်ပျက်တွေက မနေ့တနေ့ကလို ပါပဲရှင်…ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မကျမောမိတယျ